(No.34 ,May6, 2022)
၁။ ပါဝင်သင့်သူအားလုံး မပါသဖြင့် စစ်ကောင်စီ၏ ဆွေးနွေးပွဲ မတက်နိုင်ကြောင်း KIO ထုတ်ပြန်
၂။ ကွတ်ခိုင် ကချင်စစ်ရှောင်များ နေရာအသစ်သို့ ပြောင်းရွေ့ရန် အကူညီလိုအပ်နေ
၃။ မန်ခိန်ရပ်ကွက် နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် ရပ်ထားသည့် သုံးဘီးတစ်စီး အခိုးခံရ
၄။ စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် MRTV မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို Apple store နှင့် Google playstore တို့မှ ဖယ်ရှားခံရ
၅။ NUG အစိုးရ အွန်လိုင်းပညာရေးအစီစဉ်တွင် မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀၀ ဝန်းကျင် သင်ယူနေ
၆။ ကာမိုင်း ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တစ်ဦး ပစ်သတ်ခံရ
၇။ မုံးပေါ်တွင် ယနေ့ည စစ်ကောင်စီနှင့် MNDAA တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေ
၈။ အလော့ဘွမ်အနီးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ စစ်ရေး ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေဟု ဒေသခံများပြော
၉။ ဖားကန့်တွင် စစ်ကောင်စီ ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးကြောင့် ပြည်သူ ၂ ဦး သေဆုံး
၁၀။ စစ်ကောင်စီရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်မှုက အချိန်ခါကောင်းမဟုတ်ကြောင်း KNPP ထုတ်ပြန်
၁၁။ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်ဖို့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ စုစည်းဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ KNPP ပြော
၁၂။ မားခရော်ရှေ့ ကျေးရွာနဲ့ ထားလဲကျေးရွာအကြားမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့
၁၃။ မင်းအောင်လှိုင် ဦးခေါင်းပုံကို တူမီးသေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး ကယားရိုးရာ စစ်ခူ(စပ်ခူ)ကို ပြုလုပ်ခဲ့
၁၄။ KNU တပ်မဟာ ၅ တွင် ဧပြီလအတွင်း တိုက်ပွဲ ၃၀၀ ကျော်တွင် စစ်ကောင်စီ ၂၀၀ နီးပါးနှင့် KNLA ၃ ဦးကျဆုံး
၁၅။ BGF ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည့် ဒေသခံရွာသားများ စစ်ကောင်စီအတွက် ပေါ်တာအဖြစ် ပို့ဆောင်ခြင်းခံရ
၁၆။ ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိ PDF တပ်စခန်းတစ်ခု တိုက်ခိုက်ခံရပြီး လက်နက်အချို့ပါသွား
၁၇။ KNDO သို့ ဘက်ပြောင်းသည့် ဗိုလ်စလုံး ဦးဆောင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲ ပြုလုပ်
၁၈။ တော၊ တောင်ကြားက စစ်ရှောင်တစ်သောင်းကျော် စားနပ်ရိက္ခာ အရေးပေါ်လိုအပ်နေ
၁၉။ ဝင်းရော်ဒေသမှ ဒေသခံအရပ်သား ၁၀ ဦးခန့် စစ်ကောင်စီတပ် ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်သဖြင့် ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိ
၂၀။ ငွေလွှဲ၊ ငွေလဲလုပ်ဆောင်နေသူများကို စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေ၍ လုပ်ငန်းရှင်များအခက်တွေ့
၂၁။ မတူပီမြို့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်က အမျိုးသမီး ၆ ဦး အပါအဝင် ပြည်သူ ၇ ဦး ဖမ်းဆီး
၂၂။ မင်းတပ်-မတူပီကြား တိုက်ပွဲ စစ်ကောင်စီဘက် အနည်းဆုံး ၉ ဦးသေဆုံး
၂၃။ ဖလမ်းမြို့နယ် ရမ်ထလိုကျေးရွာတွင် စစ်ကောင်စီတပ်က လူနေအိမ် ၇ လုံး မီးရှို့
၂၄။ ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်း ၂ ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်သားအနည်းဆုံး ၂၀ ဦးသေဆုံး
၂၅။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံမူစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဆွဲရေး ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း မွန် အမျိုးသားရေးရာညီလာခံ-၂၀၂၂ ထုတ်ပြန်
၂၆။ AA တပ်မှူးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က အနောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှူးကို လူမှုကွန်ရက်တွစ်တာကနေ သတိပေးပြီး နောက် ဖြစ်လာမည့်အကျိုးဆက်မှန်းဆ၍မရဟုဆို
၂၇။ AAကို ထောက်ပံ့ကြေးပေးသည်ဟုဆိုကာ ရခိုင်နှင့်မူဆလင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၂ ဦးကို အမှုဖွင့်ရန်စီစဉ်နေ
၂၈။ စစ်ကောင်စီဖိတ်ကြားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ဟု KIOကထုတ်ပြန်ချက် ထွက်လာပြီးနောက် ညီနောင် မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတက်/မတက်အပေါ်လူအများအာရုံစိုက်စရာဖြစ်လာ
၂၉။ မြောက်ဦးတွင် သေနတ်သံ ၁ဝ ချက်ခန့် ထွက်ပေါ်ခဲ့၍ ဒေသခံများအကြား စိုးရိမ်ခဲ့ရဟုဆို
၃၀။ ကျောက်မဲမြို့နယ် ကလေးငယ်နှစ်ဦး မိုင်းနင်းမိပြီး ဆေးကုသဖို့ ခက်ခဲနေ
၃၁။ ချင်းမိုင် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံး သံဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး CDM ပါဝင်
၃၂။ မုံးကိုးတွင် စစ်ကောင်စီ နှင့် MNDAA တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်
၃၃။ မူဆယ်မြို့နယ်တိုက်ပွဲကြား စကစ ပေါ်တာဆွဲသွားသည့် သျှမ်းလူငယ် ၂ဦး ကျည်ထိသေဆုံး
၃၄။ တာချီလိတ်မြို့ ရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးရုံး ပစ်ခတ်ခံရ
၃၅။ မူဆယ်မြို့ PDF မိသားစုဝင်တစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီ မှ ဓားစာခံ အဖြစ်ဖမ်းဆီး
၃၆။ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ ဝန်ထမ်း (၃) ဦး ပစ်သတ်ခံရ
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို ပါဝင်မည် မဟုတ် သေးကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဗဟိုကော်မတီ က ယနေ့ သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ယခု တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲတွင် ပါဝင်သင့်သော အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို ဖိတ်ကြားမှုမရှိခြင်းနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်သွားမည်သာဟု ကမ်းလှမ်းချက်တွင် ပါရှိသောကြောင့် တက်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်အဖွဲ့ KIO ဗဟို ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူ က KNG သတင်းဌာနကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
KIO/KIA သည် တရားမျှတပြီး မှန်ကန်သော ဆွေးနွေးပွဲကိုသာ လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားတော်လှန် ရေးအဖွဲ့များ၊ ပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေ သော ပြည်သူများ၏ တောင်ဆိုချက်များကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသူက ဆက်ဆိုထားသည်။ ယနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အချက် ၅ ချက်ပါဝင်ပြီး နံပါတ် ၄ အချက်တွင် ‘ပါဝင်သင့်သူအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိခြင်း၊ နိုင်ငံ၏ အရေးအရာများကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာမည်ဟူသော သဘောထားမပါရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်’ဟု အဓိက ဖော်ပြထား သည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံ၏ အရေးအရာများကို တန်းတူဆွေးနွေးနိုင်မည့် အချိန်အခါအခင်းအကျင်းရောက်မှသာ ပါဝင်ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ယနေ့ KIO ၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြည်သူအများစုလည်း ထောက်ခံကြပြီး အာဏာရှင်အဆုံး သတ်ရေး ပိုမိုအားကောင်းလာတော့မည်ဟု လူမှုကွန်ရက်စာမျက်ပေါ်တွင် ရေးသားဖော်ပြနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ကွတ်ခိုင် ဘုရားကျောင်းဝင်းမှာ ကာလကြာခိုလှုံခဲ့ရတဲ့ ကချင်စစ်ရှောင်တွေဟာ အခက်အခဲရှိလာတဲ့အတွက် နေရာအသစ်ကို ပြောင်းရွေ့ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နေရာသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ရာမှာ ကုန်ကျစားရိတ် များပြားမှာ ဖြစ်လို့ အကူ အညီတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့အတွက် နေရာပြောင်းရွေ့ဖို့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ သီးသန့် နေရာချထားပေး တာမျိုး မရှိတဲ့အပြင် လိုအပ်နေတဲ့ငွေပမာဏဟာ အလွန်များပြားတဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလိုကူညီထောက်ပံ့မှု လိုအပ်နေတာဖြစ် တယ်လို့ ကွတ်ခိုင် စစ်ရှောင်စခန်း ၁ မှ စစ်ရှောင်ပြည်သူတစ်ဦး KNG သတင်းဌာန ကို ပြောပါတယ်။
မြေနေရာအသစ်မှာ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ဖို့ တစ်အိမ်ထောင်မှာ ငွေကျပ် (၂၅) သိန်းစီ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ လာမည့် ဇွန်လမှာ စခန်း အတွက် စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း (၇၀၀) ကျော်လိုအပ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရှောင် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (၄၀) ကျော်ရှိ ပြီး၊ လူဦးရေ (၂၀၀) ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီစစ်ရှောင်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် NLD အစိုးရက မြေနေရာအသစ်မှာ နေအိမ်တွေ အထိ ဆောက်လုပ်ပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် အစီစဉ်တွေ ပျက်ပြယ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း စစ်ရှောင်စခန်း စုစုပေါင်း (၁၀) ခု ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသည့်အထဲက အခုစစ်ရှောင်တွေက ကေဘီစီ စစ်ရှောင် စခန်း (၁)က ဖြစ်ပါတယ်။ အခု စစ်ရှောင်များသည် လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စစ်ကောင်စီ နဲ့ ကေအိုင်အေတို့ကြား ရှမ်းမြောက် တခွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နားခရိန်၊ နောင်းပါ၊ ဂလောင်း၊ နမ်းမား ကျေးရွာတွေကနေ အများစု ထွက်ပြေးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မန်ခိန်ရပ်ကွက်၊ အုပ်စု (၅) အပိုင်းရှိ နေအိမ်၌ ရပ်ထားသည့် သုံးဘီးတစ်စီး ယနေ့နံနက် အစော ပိုင်းတွင် အခိုးခံရ‌ မိသားစုများမှ သိရသည်။
သုံးဘီး၏ တန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်း ၅၀ ရှိပြီး ဝယ်ယူထားတာ မကြာသေးကြောင်း လက်ရှိတွင် သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းများကို တိုင်ကြား တာမျိုး မရှိပဲ မိမိဘာသာ ရှာဖွေနေကြပြီး တစ်ပတ်ရစ် second ရောင်းတဲ့ဆိုင်များကိုလည်း အကြောင်းကြားထားသည် ဟု သူမ က ဆက်ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ မန်ခိန်ရပ်ကွက် အုပ်စု(၅) အပိုင်းတွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ရက် အင်္ဂါနေ့ မနက်ပိုင်း လူအိပ်ချိန်မှာပဲ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ဆင်တူသည့် နေအိမ်တစ်အိမ်မှ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး အခိုးခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ခိုးဆိုးလုနိုက်ပိုများလာကြောင်း ဒေသခံများ ပြောသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/05/may5-sm2/
စစ်ကောင်စီတပ်၏ MRTV မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို အွန်လိုင်းပေါ်တင်ပြီး တစ်ရက်အကြာမှာ Apple ကုမ္ပဏီ App store နှင့် Google playstore တို့မှ ဖြုတ်ချလိုက်ပြီဖြစ်သည်ဟု Justice for Myanmar က မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖော်ပြထား သည်။ နေပြည်တော်တွင် မေလ ၄ ရက်နေ့ အခမ်းအနားဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် စစ်ကောင်စီ၏ အပလီကေးရှင်ကို Apps Web Social ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် store နှစ်ခုစလုံးမှ အလျင်အမြန်ဖယ်ရှားမှုအပေါ်ကြိုဆိုပါသည်ဟု Justice for Myanmar ကဆိုသည်။
အက်ပလီကေးရှင်း ရေးသားထုတ်ပြန်သည့် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Apps Web Social LLC ၏ နာမည်ကို Justice for Myanmar က ဖော်ထုတ်ပြောကြားပြီးနောက် ကုမ္ပဏီက ယင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကို ဖြုတ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ကောင်စီက မြန်မာ ပြည်သူများအပေါ် ၎င်းတို့၏ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် သတင်းမှားများနှင့် အမုန်းစကားများ ဖြန့်ဝေရန်အတွက် ယင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသည်ဟု ထုတ်ပြန်ထား သည်။
Apple ကုမ္ပဏီနှင့် Google ၏ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Alphabet တို့အနေဖြင့် စစ်ကောင်စီတို့၏ ပလက်ဖောင်းများနှင့် ၎င်းတို့ ထိန်းချုပ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို တားဆီးပိတ်ပင်ရန် Justice for Myanmar က ထပ်မံတောင်းဆို ထားသည်။ ကချင် ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားခရိုင်တွင်လည်း စစ်တပ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့် မြန်မာဘီယာ၊ ဒဂုံဘီယာ၊ အေဘီစီဘီယာ၊ စတဲ့ထုတ်ကုန် များကို ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများ မလုပ်ရန် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO က ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက စတင်ပြီး ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/06/may-6-sm-1/
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှဦးစီးကာ သင်ကြားနေသည့် ကြားကာလ အွန်လိုင်းပညာရေး အစီစဉ်တွင် မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်ကောင်စီမှ ဖွင့်လှစ်သည့် ပညာရေးအစီအစဉ် ကျောင်းသူ၊ သားဦးရေ ၁၈၀၀ခန့် တက်ရောက်နေကြောင်း မြစ်ကြီးနား တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ယာယီ ဥက္ကဋ္ဌထံမှ သိရှိရသည်။ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမူမဖြစ်ခင် မြစ်ကြီးနား တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသားဦးရေ ၇ ထောင်ရှိခဲ့သည့်အနက် လက်ရှိ NUG အစိုးရ၏ ကြားကာလပညာရေး အစီစဉ်တွင် ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ ၁၈၀၀ ခန့် သင်ကြားနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သင်ကြားနေသော အစီစဉ်များမှာ ၂၀၂၀ မတ်လတွင် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ရပ်နားခဲ့ရသည့် ဒုတိယနှစ်ဝက်ကိုအစမှ ပြန်လည် သင်ကြားပေးနေသည့်အပြင် ကျောင်းသူ၊သားများအနေဖြင့် သင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးတိုင်း နားလည်သင်ယူမှုကို စစ်ဆေးသည့် အနေဖြင့် Assignment ထပ်ခြင်း၊ အခန်းဆုံးစာမေးပွဲများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ဖြေဆို‌ရကြောင်း သိရသည်။ အောင်ရှုံး စီစစ်ပြီး နောက် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှပေးအပ်သည့် ယာယီဘွဲ့ ထောက်ခံစာနှင့် အတန်းပြီးဆုံးကြောင်း ထောက်ခံစာများရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီလ၁၅ရက်နေ့က zoom မှ တစ်ဆင့် ဖွင့်လှစ်သည့် မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် ကြားကာလ အွန်လိုင်းပညာရေးအစီအစဉ်ဖွင့်ပွဲတွင် မြစ်ကြီးနား တက္ကသိုလ် ကောင်စီမှ ဆရာတစ်ဦးက ပြောဆိုထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှစကာ ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့် တက္ကသိုလ်များ၊ ကျောင်းများပိတ်ထားခဲ့ရသည့်အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှစကာ စစ်ကောင်စီတပ်မှ အာဏာသိမ်းလိုက်သည့်နောက် အစိုးရ၏ ယန္တရားလည်ပတ်မူ ရပ်တန့်နိုင်ဖို့ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ CDM ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး စစ်အာဏာရှင်အား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကာ တက္က သိုလ်ကျောင်း၊ အခြေခံပညာရေးကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊သူများလည်း စစ်ကောင်စီမှ ဖွင့်သည့် ကျောင်းများတွင် တက်ရောက် ခြင်းမပြုဘဲ NUG အစိုးရ၏ ကြားကာလ ပညာရေးအစီစဉ်တွင် တက်ရောက်သူများစွာ ရှိလာသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ကားမိုင်မြို့တွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်း ၈နာရီဝန်းကျင်တွင် စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ကားမိုင်းဌာ နေ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး သေနတ်ပစ်သတ်ခံလိုက်ရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ပစ်သတ်ခံရသူမှာ အသက် ၅၈နှစ်အရွယ်ရှိ ဦးဇော်ဌေး ခေါ်သူဖြစ်ပြီး ကားမိုင်းမြို့မရပ်ကွက်ရှိ မြန္ဒာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတွင်း ထိုင်နေစဉ် ဆိုင်ကယ် မောင်နင်းလာသော လူ ၂ဦးက ဝင်ရောက်ပစ်သတ်သွားသည်ဟု ကားမိုင်းဒေသခံတစ်ဦးက KNG သတင်း ဌာနကို အတည်ပြုပြောဆိုသည်။ အဆိုပါ ပစ်သတ်ခံရသော ဦးဇော်ဌေးကို မည်သည့်အဖွဲ့က လာရောက်ပစ်သတ်သွားသည်ကို အသေးစိတ်မသိရသေးဘဲ လက်ရှိတွင် ကားမိုင်းမြို့ အခြေစိုက် စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ရဲများက လာရောက်စစ်ဆေး မှုများရှိနေကြောင်း သိရပါသည်။
ကားမိုင်တွင် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များ ပစ်သတ်ခံရမှု ယခုအကြိမ်သည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သော ၂၀၂၁ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၁ရက်နေ့တွင် ကားမိုင်းမြို့ မအူပင်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးတင်အောင် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ၊ မူဆယ်မြို့နယ် မုံးပေါ် တွင် ယနေ့ည ၉ နာရီဝန်းကျင်မှ မိုင်ဖန် ရှိ စစ်ကောင်စီ တပ်မ ၉၉ နှင့် ကိုးကန့် MNDAA တို့ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေကြောင်း သိရသည်။
မုံးပေါ်အောက်ဘက် ကပ်ရပ်ရှိ မိုင်ဖန်ကျေးရွာတွင် စစ်ကောင်စီ တပ်မ ၉၉ ကင်းစောင့်အဖွဲ့ ၃၀ ဝန်းကျင် ရွာထိပ်နားရှိနေစဉ် MNDAA မှ သွားရောက်ပစ်ခတ်ရာမှ တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
စစ်တပ်ဘက်မှ လက်နက်ကြီးများနဲ့ ပစ်ခတ်မှုများရှိနေသောကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများမှာ ထွက်ပြေးရန် ခက်ခဲနေကြောင်း ပြောသည်။ မုံးပေါ်ဒေသတစ်လျှောက်စစ်တပ်နဲ့ ကိုးကန့် MNDAA တပ်ဖွဲ့တို့ လတ်တလော စစ်ရေးလှုပ်ရှားများပုံမှန်ပြုလုပ် နေပြီး တိုက်ပွဲမကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/04/may-4-bs-1/
ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်မြို့နယ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ် နယ်မြေ အလော့ဘွမ်အနီးရှိ ရှန်ထုန်းဘွမ့်တွင် တပ်စွဲထားသော စစ်ကောင်စီတပ်များသည် စခန်းတွင်း စစ်ရေးအတွက် အရေးပါသော ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်နေ ကြောင်း ဒေသခံများ ပြောသည်။ စစ်ကောင်စီတပ်၏ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ကားများသွားလာမှုအတွက် စစ်အင်အား ၁၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ဖြင့် လိုက်ပါ လုံခြုံရေးပေးနေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
မြစ်ကြီနား- ဗန်းမော် ကားလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ နွမ်းလန့်ကျေးရွာအရှေ့ဘက် ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့၏ တောင်ဘက်တွင်ရှိသော အဆိုပါ ဒေသတစ်ကြောတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ စစ်အင်အားတိုးချဲ့ခြင်း နှင့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ပုံမှန်ရှိနေသော်လည်း တိုက်ပွဲသံ ငြိမ်သက်နေသည်မှာ ၆ လခန့် ကြာရှိပြီဟု သိရသည်။ ရှန်ထုန်ဘွမ့်သည် စစ်ရေးအရ အရေးပါသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်၏ ခလရ ၁၄၂ ၊ ခမရ ၄၃၈၊ ခမရ ၃၂၀၊ ခမရ ၃၈၇ အပြင် အခြားစစ်ကြောင်းများဖြင့် စခန်းချနေသည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ ရှန်ထုန်းဘွမ့်သည် ပြီးခဲ့သော ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA မှ တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော အလော့ဘွမ့် (A Law Bum) စခန်း အနီးတွင် တည်ရှိသည်။
လက်ရှိ ကချင်ပြည် နယ်နမိတ်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြား တိုက်ပွဲသံများ ငြိမ်သက်နေသော်လည်း ကချင် စစ်ကိုင်းနယ်စပ်ဘက်တွင် KIA ဦးဆောင်သော PDF များဖြင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲ ပုံမှန်ဖြစ်ပွားနေသည်။ စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကို ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သူကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ပြီး တွေ့ဆုံမည့်အဖွဲ့များအနေဖြင့် မေလ ၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး စာရင်း ပေးရန် ပြောဆိုထားသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/04/may-4-y-1/
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်း မှော်ပုံကျေးရွာတွင် စစ်ကောင်စီပစ်ခတ်သည့် လက်နက်ကြီးကြောင့် ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် နှင့် ဈေးဝယ်သူအမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း လုံးခင်းကျေးရွာဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ယမန်နေ့ည ၈ နာရီခန့်အချိန် တွင် ဖားကန့်မြို့နယ်ရှိ ဆန်ခါဘက်မှ လုံးခင်းဘက်သို့ စစ်ကောင်စီတပ်မှ လက်နက်ကြီး နှစ်လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာ တစ်လုံးကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးရုံဂွေအသက် ၅၀ နှစ်နှင့် ဈေးလာဝယ်သူအမျိုးသားတစ်ဦး လက်နက် ကြီးကျည်ထိမှန် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း လုံးခင်း မှ အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်နက်ကျည်ထိမှန်သေဆုံးသွားသူ နှစ်ဦးမှာ ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးရုံဂွေနှင့် ဈေးဝယ်သူ ဦးမောင်မြင့် အသက် ၄၅ နှစ်တို့ဖြစ် ကြောင်း သိရပြီး ရုပ်အလောင်းအား ယနေ့ သဂြိုလ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒေသခံများ၏ ပြောဆိုချက်အရ ည ၇ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် မဇွပ်ယန်ကျေးရွာဘက်မှ လက်နက်ကြီးသံများ ဦးစွာကြားခဲ့ရပြီး ည ၈ နာရီဝန်းကျင်တွင်မူ မှော်ပုံထမင်းဆိုင်ရှေ့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲမှသာ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ပစ်ခတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်ဟု ဒေသခံ ၁ ဦးက ပြောသည်။
လက်နက်ကြီးကျကွဲသည့် မှော်ပုံနှင့် မဇွပ်ယန်အကျဉ်းထောင်သည်တစ်မိုင်ခန့်မျှသာကွာဝေး‌ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ ဖားကန့်တွင် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်တွင်လည်း စစ်ကောင်စီတပ်က ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ ၉ ဘက်သို့ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/04/may-4-z-1/
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ စစ်ကောင်စီကနေပြီး ဖိတ်ခေါ်မှုတွေဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး လွမ်းခြုံမှုမရှိသလို၊ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းတွေကို ကြိုးစားဖြေရှင်းဖို့အတွက်မဟုတ်တာကြောင့် တွေ့ဆုံဖို့အချိန်ကောင်း မဟုတ်ဘူးလို့ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)က မေလ ၅ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းဖို့ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကို သဘောတူလက်ခံတဲ့ အင်အားစုအားလုံး ဖိတ်ခေါ် ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ လည်းပါရှိပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး တော်လှန်နေတဲ့အင်အားစုအားလုံးပါဝင်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အတွက် KNPPကနေပြီး အချက်(၃)ချက် တောင်းဆိုထားပါတယ်။ တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာ စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီး စစ်ရပ် ဆိုင်းဖို့၊ စစ်ရှောင်တွေကို ကူညီမယ့်နိုင်ငံတကာကူညီပံ့ပိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို တရားဝင်လွတ်လပ်စွာ ကူညီဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု ဖို့အပြင် မတရားသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ လူထုတွေအတွက် စစ်ကောင်စီတပ်က ကျူးလွန်သူတွေကို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက် မေလ ၂ ရက်နေ့မှာ စစ်ကောင်စီရဲ့ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အသိပေးဖိတ်ခေါ်စာပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ လည်း စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ မင်းအောင်လှိုင်က ရုပ်မြင်သံကြားကတဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာလည်း ရှိပါတယ်။
စစ်ကောင်စီကို တော်လှန်နေတဲ့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ စုစည်းပြီး ပူးပေါင်းမှသာလျှင် အမြန်ဆုံးအောင်မြင်နိုင် မယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ အမြဲတမ်း ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင် ရီမာန်ထူးက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးကြန့်ကြာခြင်းရဲ့ အဓိကအချက်မှာ အင်အားစုများ ကွဲပြားနေခြင်းဖြစ်ပြီး လက်နက်ခဲယမ်းများ ခက်ခဲနေခြင်း ကြောင့်လည်း ကြန့်ကြာနေတာဖြစ်တယ်လို့ ရီမာန်ထူးက ဆက်ပြောပါတယ်။
အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားညီညွှတ်ရေး အစိုးရ (NUG) လမ်းညွှန်မှု အောက်က ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်-ဒီးမော့ဆို (DMO_PDF) ကလည်း လက်ရှိ တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အပေါ် စစ်ဗျူဟာ ပိုင်းမှာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ ကရင်နီပြည်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်း တပ်ဖွဲ့ တွေများတဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသားများ ကာကွယ်ရေးတပ် (KNDF) တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါ တယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်လာတဲ့ တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ (၆)ဖွဲ့နဲ့ စုဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကရင်နီတော်လှန်ရေး တပ်ပေါင်းစု (KRU) ကတော့ အားလုံးစုစည်းဖို့ အရေးကြီးသလို ဘယ်အချိန်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းလို့မရတာကြောင့် နေရာဒေသ ချင်းမတူညီတဲ့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ မြေပြင်မှာ စုစည်းဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းမှု မရှိခင်ကတည်းကဆိုရင်လည်း ကရင်နီပြည်မှာ စစ်တပ်ကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန် နေကြတဲ့ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ တွေရှိပါတယ်။
ကရင်နီပြည်မှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် (KNDF) ၊ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်- ဒီးမော့ဆို (DMO-PDF) ၊ ကရင်နီတော်လှန်ရေး တပ်ပေါင်းစု (KRU) ၊ ဖရူဆို PDF ၊ လွိုင်ကော် PDF ၊ မိုးဗြဲ PDF ၊ ဖယ်ခုံ PDF ၊ KPDF စတဲ့ အဖွဲ့တွေဟာ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကြာတော်လှန်ရေးလုပ်လာတဲ့ ကရင်နီတပ်မတော် (KA) ကနေလည်း ခွဲထွက်သွားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့တွေ ရှိနေ သလို အဲ့ဒီအစုအဖွဲ့တွေ ပြန်စုစည်းဖို့ ကြိုးပမ်းတာတွေ လည်း ရှိပါတယ်။ https://www.kantarawaddytimes.org/
ယမန်နေ့ မေလ ၃ရက်နေ့က ဖရူဆိုမြို့နယ် မားခရော်ရှေ့ကျေးရွာနဲ့ ထားလဲကျေးရွာအကြားမှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ကရင်နီဒေသခံ ကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ ၁နာရီကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးဆီကနေသိရပါတယ်။ တိုက်ပွဲအပြီး စစ်ကောင်စီက ၁၂၀မမ၊ ၆၀မမ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအနီးက ဒေါပိုရှေ့ကျေးရွာကို ကျရောက်ခဲ့ပြီး နေအိမ်နှစ်လုံး ပျက်စီးသွားတယ်လို့ ၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီနဲ့ KA၊ KNDF B-15တို့ မနက် ၁၀နာရီ ၄၀ မိနစ်ကနေ တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်က ၂ဦး ထက်မနည်း သေဆုံးသွားတယ်လို့ KNDF B-15 ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ကရင်နီပြည်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စစ် ကောင်စီနဲ့ ကရင်နီဒေသခံ ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ နေ့စဉ်နီးပါး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူ့အင်အားစု ( PKPF )ရဲ့ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလ ( ၃၀ )ရက်နေ့အထိ ကောက်ယူထားတဲ့ စာရင်းအရ တိုက်ပွဲပေါင်း ၂၇၄ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီဘက်က ၁၀၆၅ဦးသေဆုံးသလို ကရင်နီဒေသခံ ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ ဘက်က ၁၁၆ဦး ကျဆုံးသွားတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ https://www.kantarawaddytimes.org/
မေလ ၁ရက်နေ့က ကယားလူမျိုးတို့ရဲ့ ရိုးရာဓလေ့အရ မကောင်းတဲ့ ဝိဉာဉ်တွေကို နှင်ထုတ်တဲ့ စစ်ခူ(စပ်ခူ) ပြုလုပ်ရာမှာ အဖြူရောင်ကြက်နဲ့အတူ စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဌ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ပုံကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်း တစ်နေရာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ကြက်ဖြူ ဦးခေါင်း နဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ဦးခေါင်းပုံကို တူမီးသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။ စစ်ခူ( စပ်ခူ )မှာ မင်းအောင်လှိုင်ဓာတ်ပုံရဲ့ခေါင်းကို တူမီးသေနတ်နဲ့ပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် သူဟာ ဦးခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရပြီး သေဆုံးသွား မှာဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း စစ်ခူ( စပ်ခူ )မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဒီးမော့ဆိုအရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာ စစ်ရှောင်နေတဲ့ ခူတီရယ်က ပြောပါ တယ်။
ကယားလူမျိုးတွေဟာ မိမိတို့ နေအိမ်အတွင်း သို့မဟုတ် ကျေးရွာအတွင်းမှာ မကောင်းတဲ့ ကိစ္စကြုံလာရပြီဆိုရင် စစ်ခူ(စပ်ခူ) ကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး မကောင်းဆိုးဝါး ဝိဉာဉ်ကို နှင်ထုတ်လေ့ရှိကြတာပါ။ မကောင်းတဲ့ဝိဉာဉ်တွေကို မောင်းထုတ်လိုက်ရင် ကံကောင်းခြင်းတွေ ပြန်ရောက်လာမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။ လက်ရှိကရင်နီပြည်မှာ ဖမ်းဆီး၊ သတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ၊ စစ်ရှောင်ရင်းမသေသင့်ပဲ သေဆုံးနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှရှိနေပြီး ဒီအကြောင်းရင်းတွေရဲ့ တရားခံဟာ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင် ဖြစ်တာကြောင့် အခုလို ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ် လို့ ခူတီရယ်က ပြောပါတယ်။
ကရင်နီပြည်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီနဲ့ ကရင်နီဒေသခံကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ် ပွားကြပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ ဒေသခံ နှစ်သိန်းနီးပါးရှိနေပြီး အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသူ အများအပြားရှိ ပါတယ်။ https://www.kantarawaddytimes.org/
KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ တပ်မဟာ(၅) နယ်မြေ၌ ဧပြီလတစ်လအတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၂၀၀ နီးပါးနှင့် KNLA ဘက်က ၃ ဦးကျဆုံးခဲ့ကြောင်း KNU တပ်မဟာ (၅)က ထုတ်ပြန်သည့် လစဉ်တိုက်ပွဲ စာရင်းချုပ်အရ သိရသည်။
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ ၅ နှင့် စစ်ကောင်စီ၊ နယ်ခြားစောင့် တပ် (BGF) ပူးပေါင်း တပ်တို့အကြား ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလအတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း (၃၈၃) ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၇၃ ဦးသေဆုံးကာ ၈၇ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသူများထဲတွင် တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦး၊ ဒု-တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦး၊ တပ်ကြပ်ကြီး ၂ ဦးနှင့် တပ်ကြပ်အဆင့်တစ်ဦးပါဝင်ကြောင်းနှင့် KNLA ဘက်တွင်မူ ၃ ဦးကျဆုံးကာ ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် စစ်ကောင်စီဘက်မှ အသုံးပြုသည့် ထောက်ပို့တံတား ၃ စင်း၊ ထောက်ပို့ယာဉ် (၄)စီး၊ လက်နက်သို လှောင်ရုံ (၂)လုံးကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် စစ်ကောင်စီဘက်မှ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုဖြင့် ပြန်လည်တုန့်ပြန်ရာ တွင် ဗုံး ၇ လုံးလာရောက် ကြဲချခဲ့သလို လက်နက်ကြီးဖြင့် ၆၁၄ ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလည်း KNU တပ်မဟာ ၅ ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
KNU တပ်မဟာ ၅ ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ယခုဧပြီလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများသည် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လထက် တိုက်ပွဲ အကြိမ်ရေပိုများသလို စစ်ကောင်စီဘက်မှလည်း ထိခိုက်သေဆုံးမှု ပိုများသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ မတ်လအတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း (၃၅၉) ကြိမ်ဖြစ်ပွားရာတွင် စစ်ကောင်စီနှင့် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၁၁၈) ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ယခင်လ KNU တပ်မဟာ (၅)ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ https://kicnews.org/2022/05/
သံလွင်မြစ်အနောက်ခြမ်းရှိ ကျေးရွာ (၈)ရွာတွင် ယခု မေလဆန်း ၁ ရက်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF) အမှတ် (၁၀၁၄) တပ်ရင်း၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည့် ဒေသခံကျေးရွာသား ၁၀၀ ဦးဝန်းကျင်ထဲမှာ ၅၀ ဦးခန့်ကို စစ်ကောင်စီတပ်၏ ဝင်းတာပန်နှင့် လေးကေစခန်းသို့ပို့ဆောင်မည့် စစ်ကူများနှင့်အတူပေါ်တာအဖြစ် ပို့ဆောင်ခြင်းခံလိုက်ရကြောင်း ဒေသခံကျေး ရွာသားများထံမှ သိရသည်။
သံလွင်မြစ်အနောက်ခြမ်း မြိုင်ရွာ၊ ကုန်းတန်းကြီးရွာ၊ ဝဲပျံချောင်းဝရွာ ၊ ဘုရားဆိပ်ရွာ၊ ဝဲပျံရွာ၊ ပေပင်ဆိပ်ရွာ၊ မိထ္ထီလာရွာနှင့် မိဇိုင်းရွာစသည့် ကျေးရွာများထဲသို့ မေလ ၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက BGF အမှတ် ၁၀၁၄ တပ်ရင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အိမ်စီး ကားကြီး ၆ စီး ၊ အင်အား ၅၀ ခန့်ဖြင့် ကျေးရွာ ၀င်လမ်း၊ ထွက်လမ်းများအား ပိတ်ဆို့ကာ သေနတ်ပစ်ဖောက်၍ ဒေသခံ ရွာသားများနှင့် လူငယ်များအား အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားမှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် လတ်တလော တွင် ပေပင်ဆိပ်၊ ဝဲပျံကျေးရွာဘက်တကျောနှင့် သံလွင်မြစ် တစ်ဖက်ကမ်း ရွှေဂွန်း၊ သံလွင်မြစ်အလယ်ရှိ ကော့လုံကျွန်း ဘက်များတွင် ဗိုလ်တင်ဝင်းဦးစီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဂိတ်များဖွင့်၍ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပြီး ပုန်းရှောင်နေသူများကို စစ်ဆေး ဖမ်းယူမှုများ ပြုလုပ်နေသောကြောင့် လူငယ်များအနေဖြင့် နေစရာ၊ သွားစရာမရှိဖြစ်စေကြောင်းလည်း အဆိုပါ ဝဲပျံဒေသခံ က ဆက်ပြောသည်။
BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ထိုဒေသများတွင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ဒေသခံရွာသား များအနေဖြင့် မိမိနေရပ်ဒေသကျေးရွာများတွင် တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားသော်လည်း အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းနှင့် စစ်မှုထမ်းခိုင်း ခြင်းအပြင် ပေါ်တာအထမ်းသမားအဖြစ် ခိုင်းစေခံရခြင်း အပြုမခံရစေရန် ပုန်းအောင်းရှောင်တိမ်းနေထိုင်ကြရသလို အသက် အန္တရာယ်ကြုံကြရမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်ပူပန်မှု မြှင့်တက်နေကြကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။ ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကို သိရှိနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ခြားစောင့်တပ်-BGF တာဝန်ရှိသူများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ မရရှိပေ။
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး တောင်ငူခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၂) နယ်မြေ(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး )ထန်း တပင်မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့-PDF စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ မေလ (၄)ရက်နေ့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်၏ အင်အားသုံးဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခံရသည့်အတွက် လက်နက်အချို့ပါသွားသည်ဟု သိရသည်။
ယမန်နေ့ ညနေ (၄) နာရီဝန်းကျင်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား (၅၀) ကျော်သည် လက်နက်ကြီး လက်နက် ငယ်များဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သည့်အတွက် စခန်းရှိ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် -KNLA တပ်ရင်း(၆)တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စခန်းကိုစွန့်ခွာပေးရပြီး လက်နက်အချို့လည်း စစ်ကောင်စီတပ်လက်ထဲပါသွားသည်ဟု နယ်မြေခံ PDF နှင့်နီး စပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုစခန်းကို ဝင်ရောက်မတိုက်ခိုက်ခင် နံနက် (၅)နာရီဝန်းကျင်တွင်လည်း နယ်ကျော်လာသည့် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် PDF တပ်ဖွဲ့တို့အကြား ဘယ်ထိကျေးရွာအုပ်စု ထီးခီးအနီးတွင် ထိတွေ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်ဟုလည်း သိရ သည်။ https://kicnews.org/2022/05/
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့က ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော်-KNDO ဘက်သို့ ဘက်ပြောင်းဝင်ရောက်လာသည့် ဗိုလ်စလုံးဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော်-DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ယနေ့ မေလ ၅ ရက်နေ့တွင် ကြိုဆို ဂုဏ်ပြုပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၂၀၀ ကျော်ပါ အဆိုပါ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောနယ်ဒါးဘိုမြ ဦးဆောင်သည့် KNDO တပ်ဖွဲ့ထံသို့ ဘက်ပြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် စောနယ်ဒါးဘိုမြ ကိုယ်တိုင်လက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကာ ၎င်းတို့ကို KNDO တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ဘက်တံဆိပ်များပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီး ရာထူးနှင့် တာဝန် များကိုလည်း ပေးအပ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဘက်ပြောင်းဝင်ရောက်လာသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်များကို KNDO ၏ ကွန်မန်ဒို တပ်ရင်းအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ပြီး ဗိုလ်စလုံးကို တပ်ရင်းမှူး တာဝန်ပေးအပ်ကာ ဦးစီးစေမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းတွင် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောနယ်ဒါး ဘိုမြက ပြောဆိုထားသည်။ လတ်တလော ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU၊ ဒူးပလာယာခရိုင်၊ တပ်မဟာ (၆) နယ်မြေ ဒေါနအရှေ့ခြမ်းဒေသအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တိုက်ပွဲများတွင် ဗိုလ်စလုံး ဦးဆောင်သည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ပါဝင်တိုက်ခိုက် နေခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုအတွက်တိုက်ပွဲ ဝင်နေခြင်းဖြစ်သည့်အပေါ် ပြည်သူလူထုများ၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ယခုလို KNDO တပ်ဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြောင်းလဲရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်စလုံးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောဆိုထားသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီကို လက်နက်ကိုင်ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ရာတွင် ယခင်က DKBA မှ မပါဝင်ခဲ့သော် လည်း နောက်ပိုင်းတွင် DKBA စစ်ကြောင်းမှူးဖြစ်သူ ဗိုလ်စလုံးက ၎င်းထံ ခိုလှုံလာသည့် ပြည်မအတွင်းလူငယ်များပါဝင်၍ နယ်မြေခံ KNDO၊ KNLA တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၎င်း ဗိုလ်စလုံး တပ်စခန်းတည်ရှိရာ သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းနေရာကို ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF)နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်း၍ မြေပြင်နှင့်ဝေဟင်ပါပူးပေါင်း၍ အပြင်းအထန်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင် အချို့ ကျဆုံးခဲ့ရသေးသည်။ https://kicnews.org/2022/05/
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး သထုံခရိုင် တပ်မဟာ-၁နယ်မြေ၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်တွင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ သည့် စစ်ဘေးရှောင်အရပ်သားပြည်သူ တစ်သောင်းကျော်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ အရေးပေါ်လိုအပ်နေသည်ဟု ခရိုင်စစ်ရှောင် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်သည့်အပြင် စစ်ရှောင်များအကြား ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ နာတာရှည်ရောဂါရှိသူနှင့် လေဖြတ်ရောဂါခံစားရသူပါဝင်ခြင်းနှင့် စစ်ရှောင်ရင်း ကလေးမီးဖွားသူများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဆေးဝါးအကူအညီလည်း အရေးပေါ်လိုအပ်နေသည်ဟု သိရသည်။ လက်ရှိ တောင်ခြေ၊ လှိုဏ်ဂူနှင့် တောထဲရှိ ခြံများထဲတွင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြသည့် စစ်ရှောင်နေရာ ၂၁ နေရာမှ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၁၁,၀၅၈) ဦး စာရင်းကောက်ခံရရှိထားပြီး အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ခိုလှုံနေကြသည့် စစ်ရှောင်များစာရင်းကို မကောက်ခံနိုင်သေး ကြောင်းလည်း ခရိုင်စစ်ရှောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီထံမှ သိရသည်။
ကေအဲန်ယူ သထုံခရိုင် ဘီးလင်းမြို့နယ် ဝင်းတာပန်နှင့် လေးကေစခန်းရှိ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာပေးရန် KNDOက စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် စစ်ကောင်စီတပ်များ ထွက်ခွာခြင်းမရှိသေးသည့် အတွက် နယ်မြေအတွင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားလာခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က ကျေးရွာထဲသို့ လက်နက်ကြီးပစ် ခတ်မှုများ လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ဒေသခံအရပ်သား တစ်သောင်းကျော် ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ဝင်းရော်ဒေသရှိ စစ်ဘေးရှောင်နေကြသည့် ဌာနေလူထုများကို စစ်ကောင်စီတပ်က ဖမ်းဆီးကြိုးတုပ်ပြီး ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် ခလယ်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဒေသခံ ၁ဝ ဦးခန့် ဦးခေါင်းနှင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါများ ပြင်းထန် ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း သိရသည်။ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် -KNLA နှင့် တံခွန်တိုင်ရွာ ရဲစခန်းဝင်းအတွင်း ခြေကုပ်နေရာယူထားသည့် ကြာ အင်းဆိပ်ကြီးမြို့အခြေစိုက် စစ်ကောင်စီတပ် ခလရ -၂၈၃၊ ၃၂ ပူးပေါင်းတပ်ရင်းတို့ကြား ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၂၃ ရက်မှ မေလ ၁ ရက်နေ့အထိ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ ကျေးရွာထဲသို့ လက်နက်ကြီး များပစ်ခတ်သည့်အတွက် လူနေအိမ်နှင့် ရွာသားများ ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီး ဒေသခံအများအပြားလည်း ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခြင်းခံခဲ့ ကြရသည်ဟု ဝင်းရော်ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခံခဲ့ကြရသည့် ဒေသခံရွာသားအများစုမှာ ဦးခေါင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သည့်အတွက် နီးစပ်ရာ နေရာ များတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေကြရသည်။ ထို့အပြင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ ရွာသားများကို အဓမ္မဖမ်းဆီး၍ လူသားဒိုင် အဖြစ်အသုံးပြု ခြင်း၊ ပစ်ခတ်ရိုက်နှက်ခြင်းများအပြင် ကျေးရွာအတွင်း လက်နက်ကြီးများပါ ပစ်ခတ်မှုများ လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် ဥယျာဉ် ခြံနှင့် လူနေအိမ်များ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိပြီး နေအိမ်အများအပြားလည်း ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ကြရသည်ဟု သိရသည်။ တံခွန်တိုင်ရွာ ရဲစခန်းဝင်းအတွင်း ခြေကုပ်နေရာယူထားသည့် စစ်ကောင်စီတပ်က ၎င်းတို့စခန်းရှေ့လမ်းမ ဖြတ်သန်းသွားလာသူများကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း၊ နေအိမ်အတွင်း စစ်ပုန်းရှောင်သူများကို ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုပြုလုပ်ခြင်း၊ ရွာသားများကို ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်ပြီး ခဲယမ်းမီးကျောက်နှင့် အထုပ်များ အဓမ္မထမ်းစေခိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စစ်ကောင်စီတပ်က KNU ဝင်းရေးမြို့နယ် ထိန်းချုပ်နယ်မြေကို ထိုးစစ်ဆင်လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် ခလယ်၊ တံခွန်တိုင်၊ ပူးလိန်၊ ခလယ်ရွာလေး၊ မြို့ဟောင်း၊ ဘုရားငါးဆူ၊ နောင်းဒေ့၊ ခလယ်မွန်စု၊ ဒိုင်လွတ်၊ ကမော့ဝမ်း၊ နန်းသိုင်းထွန်၊ တံခွန်တိုင်ရွာလေးရှိ ဒေသခံဌာနေလူထု ၃, ဝဝဝ နီးပါး စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်ဟု စစ်ရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့များထံမှ သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ငွေလွှဲ ၊ ငွေလဲလုပ်ငန်းများ၊ ဒေသတွင်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ကိုင်ကြသည့် ကုန်သည်များနှင့် လုပ် ငန်းရှင်များအား စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထောက်ပံ့မှုရှိမရှိကို စစ်ကောင်စီက စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှု များ လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များမှာ အခက်တွေ့နေရသည်။ ပြည်နယ်တွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်များသည် အမျိုးသားညီ ညွတ်ရေးအစိုးရ-NUG ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ-CRPH၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့-PDF စသည့် စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ကာ ထောက်ပံ့မှုလုပ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကောင်စီအဖွဲ့များက စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နီးစပ်သူ အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်-BGF ပူးပေါင်းတပ်များသည် သာမန်အရပ်သားပြည်သူများ၊ ကုန်သည်များ၊ ငွေကြေး လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သူများအား ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးစစ်မေးမှုများအပြင် လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စများဖြင့် မြို့ပေါ်လာရောက်သည့် အရပ်သားများ၏ ဆိုင်ကယ်၊ ကားနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများကို စစ်ဆေးဖမ်းဆီးရာတွင် ငွေညှစ်တောင်းခံမှုများ ကြုံတွေ့နေကြရ သည့်အတွက် ဒေသတွင်း သွားရေးလာရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုများမှာ ခက်ခဲမှုရှိနေကြောင်း ကုန်သည်များက ပြောသည်။ ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဖားအံနှင့် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ဘက်တွင် ဖမ်းဆီး တရားစွဲဆိုခံ ရသည့် ကုန်စုံဆိုင်နှင့် ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ၁၀ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီဟု ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှ သိရ သည်။
ဖားအံ၊ ကော့ကရိတ်နှင့် မြ၀တီမြို့တို့တွင် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းအတွင်းကလည်း လုပ်ငန်းရှင်များ၏ နေအိမ်နှင့် ဆိုင်ခန်းများအား စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ ပျူစောထီး၊ မဘသနှင့် စစ်တပ်ထောက်ခံသည့်အဖွဲ့များက ၎င်းတို့အား ထောက်ပံ့ရန် စာပို့ခြိမ်း ခြောက် ငွေတောင်းခြင်း၊ ဖုန်းဆက်ခြိမ်းခြောက် ငွေတောင်းခံခြင်းများ မကြာခဏ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းလည်း ဖားအံမြို့ရှိ ခြိမ်း ခြောက်ခံရသူများက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ထိုအခြေအနေများကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဒေသတွင်းရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် အသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့လာရမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းများကို မလုပ်ကိုင်နိုင်ကြတော့ဘဲဖြစ်နေကြောင်း မြေပြင် သတင်းအရင်းအမြစ်များအရ သိရသည်။ https://kicnews.org/2022/05/
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မတူပီမြို့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်က အမျိုးသမီး ၆ ဦးအပါအဝင် ပြည်သူ ၇ ဦးကို ဖမ်းဆီးကာ စစ်ဗျူဟာ စခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီး လူမဆန်စွာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်နေသည် CDF-Matupi က ထုတ်ပြန်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့က မတူပီမြို့အခြေစိုက် စကစ စစ်ဗျူဟာစခန်းမှ တပ်သား ၂ ဦး သေနတ် ၃ လက်နှင့် CDF-Matupi တပ်ဖွဲ့ထံသို့ CDM ပြုလုပ် အလင်းဝင်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မတူပီမြို့ပေါ်နေ အမျိုးသမီး ၆ ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်းပြည်သူ ၇ ဦးကို စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသော ပြည်သူ ၇ ဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က လူမဆန်စွာဖမ်းဆီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူရသည့်အဆင့်ထိ အခြေအနေဆိုးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ မတူပီမြို့အခြေစိုက် စစ်ကောင်စီ စစ်ဗျူဟာစခန်း မှ တပ်သား ချစ်ကိုကို (တ/၃၈၇၆၈) နှင့် မုံရွာအခြေစိုက် ထပရ ၉၂၉ မှ တပ်သား ဖြိုးမင်း (တ/၅၂၅၇၃၇) တို့ ၂ ဦးသည် သေနတ်အမျိုးအစား BA-72,MA-2,MA-3 စုစုပေါင်း (၃) လက်နှင့်အတူ CDF- Matupi ထံသို့ CDM ပြုလုပ်အလင်းဝင်ခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ လက်နက် ၃ လက်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ပြည်သူများကိုဓားစာခံအဖြစ်အသုံးချ ဖမ်ဆီး ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းနှင့် အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်မှုအပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီး CDF-Matupi အနေဖြင့် စကစ အပါအဝင် မည်သည့်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆို အပေးအယူကိစ္စ လုံးဝ (လုံးဝ) မပြုလုပ်ကြောင်း CDF-Matupi က ထုတ်ပြန်သည်။
ချင်းပြည်နယ် မတူပီမြို့ကနေ မင်းတပ်မြို့ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့ စစ်ကားအစီး ၇၀ ကျော်ပါတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ CDF-Mindat တပ်ဖွဲ့တို့ဟာ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ကစလို့ မင်းတပ်-မတူပီကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာ တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး စစ်ကောင် စီဘက်က အနည်းဆုံး ၉ ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး သေဆုံးမှုဟာ အဲဒီထက်လည်း များနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်ကောင်စီ ယာဉ်တန်းဟာ မတူပီမြို့ကနေ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့ကစတင်ထွက်ခွါလာခဲ့ရာမှာ မင်းတပ်နယ်မြေ အတွင်း စတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ကစလို့ CDF-Mindat တပ်ဖွဲ့က အနီးကပ်ပြောက်ကျားတိုက် ခိုက်မှုအပါအဝင် မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ CDF-Mindat ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းဟားအွမ်ကပြောပါတယ်။
ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ မင်းတပ်-မတူပီကြား မိုင်တိုင် ၇၁ မှာဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ CDF-Mindat တပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီး ကပ်ပြောက်ကျား တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၄ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး မေ ၁ ရက်နေ့ မင်းတပ်-မတူပီကြား မိုင်တိုင် ၆၈ မှာဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ စစ်ကောင်စီဘက်က အကျဆုံးစာရင်းမသိရဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ မေလ ၂ ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲမှာတော့ စစ်ကောင်စီဘက်က ၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး CDF-Mindat တပ်ဖွဲ့က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီဘက် အကျဆုံးအများအပြားရှိနိုင်ပေမယ့် အတည်ပြုလို့မရဘူးလို့ ဆလိုင်းဟားအွမ်ကဆက်ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းဟာ မတူပီမြို့ကနေ စတင်ထွက်ခွါလာတဲ့အချိန်မှာလည်း မင်းတပ်-မတူပီကြား မိုင်တိုင် ၉၀ နဲ့ ၉၁ လောက်မှာ CDF-Matupi တပ်ဖွဲ့က ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ၁၀၂ မိုင်သာ ကွာဝေးပြီး ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ရက်ခရီးသာသွားရတဲ့ မင်းတပ်-မတူပီကြားမှာ စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းမှာ ချင်းဒေသကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အသွားတုန်းကလည်း ၁၀ ရက်ကျော်ကြာ ခရီးနှင်ခဲ့ကြပြီး တိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်း အကျ အဆုံးများလေ့ရှိပါတယ်။ https://khonumthung.org/
ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ် ဟားခါး-ဖလမ်းကားလမ်းပေါ်ရှိ ရမ်ထလိုကျေးရွာတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က ယနေ့မေလ ၄ ရက်မှာ လူနေအိမ် ၇ လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု ဖလမ်းဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည်။
စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းစစ်ကြောင်းသည် မေလ ၂ ရက်နေ့က ဟားခါးမြို့မှ ဖလမ်းမြို့ဘက်သို့ ထွက်ခွာလာကာ ယမန်နေ့ ညနေ ပိုင်းက CDF- Hakha တပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် စစ်ကောင်စီ တပ်မှ ဖလမ်း-ဟားခါး လမ်းမပေါ်ရှိ လူနေအိမ်များကို မီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF- Hakha သည် ယမန်နေ့က စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို ချွန်ကျုံးကျေးရွာနှင့် ဒုတ်ထစ်ကျေးရွာကြား တွင် ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၁၃ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု CDF- Hakha တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရသည်။ ဟားခါး မြို့မှထွက်လာသည့် စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းတွင် စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား ၁၀၀ ကျော်နှင့် သံချပ်ကား ၂ စီး၊ စစ်ကားအစီး ၂၀ ကျော်ပါဝင်သည်ဟုသိရသည်။ https://khonumthung.org/
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရှားဖိုကျေးရွာအနီးတွင် မေလ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားသော ၂ ရက်တာတိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား အနည်းဆုံး ၂၀ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည် မေလ ၂ ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကစ၍ ရှားဖိုကျေးရွာဘကို အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ရာ PDF (Kalay), CDF(KKG), RKDF, ပ.က.ဖ နှင့် Zomi PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နှင့် မေလ ၃ ရက် ညနေပိုင်းအထိ တိုက်ပွဲပြင်းပြင်း ထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြသည်။
မေလ ၃ ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ် ၂ စီးဖြင့် ရှားဖိုရွာသို့ ၂ ကြိမ်လာ ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ အဆိုပါရှားဖိုကျေးရွာတိုက်ပွဲ နှစ်ရက်တာတွင် ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှ CDF-KKG တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦး လက်နက်ကြီး အပိုင်းအစ ထိမှန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့သော်လည်း စိုးရိမ်စရာမရှိဟု သိရသည်။ ယင်းတိုက်ပွဲတွင် ပါင်းပူးတပ်ဖွဲ့မှ M1 မောင်းပြန်သေနတ် ၂ လက်၊ MA2 စက်ကလေး ၂ လက်၊ MA ကျည်အိမ် ၁ဝခု၊ ၅.၅၆ ကျည် ၁၅၀ တောင့်၊ နင်းမိုင်း ၁လုံး၊ လက်ပစ်ဗုံး ၁လုံး နှင့် ဖုန်း၂ လုံး သိမ်းဆည်းရမိပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှ လွှတ်တင်ထားသည့် ဗုံး ၃လုံး ပါဝင်သည့် တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်း ၁စင်း ပစ်ချ နိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သောကြောင့် ရှားဖိုကျေးရွာမှ အရပ်သားပြည်သူ အမျိုးသား ၂ ဦးသေဆုံးပြီး အမျိုး သမီး ၁ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ရှားဖိုကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၅၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး လူနေအိမ်များကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ အလားတူ မေလ ၁ ရက်နေ့ကလည်း ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်း အရှေ့စည်းကျေးရွာက ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းကလွဲ၍ နေအိမ်များအားလုံးနီးပါးကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ https://khonumthung.org/
ယမန်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် မွန်အမျိုးသားရေးရာညီလာခံ (၂၀၂၂) တွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့် မွန်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံမူစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဆွဲရေး ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း မေလ ၅ ရက်နေ့က မွန်ဘာသာဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါအခြေခံမူစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဆွဲရေးကော်မတီတွင် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဦးဆောင်ပါဝင်နေ သည်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။
ထို့အတူ မွန်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ဂကောံပံင်ကောံဂကူမန်) ဖွဲ့စည်းပုံကို ယာယီအားဖြင့်အတည်ပြုခဲ့ကြပြီး အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကာလနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ပြန်လည်သုံးသပ်၍ မွန်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ညှိနှိုင်းရေး(အဖွဲ့စုံ)အား ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ လက်ရှိ ယနေ့နိုင်ငံ ရေးအချိုးအကွေ့တွင် တည်တန့်ခိုင်မြဲ၍ ညီညွတ်သော အမျိုးသားအင်အားစုတရပ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးသည်သာ အရေးကြီးသည့် လိုအပ်ချက်တရပ်ဟု မွန်အမျိုးသားရေးရာညီလာခံကရှုမြင်ပြီး မွန်တမျိုးသားလုံးညီညွတ်ရေးကို ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အလေးအနက်ထား၍ အသိပေးတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မွန်အမျိုးသားရေးရာညီလာခံ (၂၀၂၂) ကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ရေးမြို့အရှေ့ဘက် ရေးချောင်းဖျားဒေသရှိ မွန် အမျိုးသားပညာရေးဌာန(ဗဟို) ညီစားစခန်း၌ ၄ ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ရာ မေလ ၅ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ကြောင်း၊ ရဟန်းသံဃာတော်၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP, မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP, အရပ်ဖက် မွန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ဖိတ်ကြားသင့် ဖိတ်ကြားထိုက်သည့် အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် လေ့လာသူများအပါအဝင် ၂၅၉ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ https://burmese.monnews.org/
ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က အနောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ထင်လတ်ဦးကို ယနေ့ သူ၏ Twitter တွစ်တာလူမှုကွန်ယက် စာမျက်နာမှတဆင့် မာမာထန်ထန် သတိပေးမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ကိုထင်လတ်ဦးသိပ်လျှောက်မလုပ်နဲ့အာရုံနောက်နေပြီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဘာညာ သောက်ဂရုစိုက်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းနေတဲ့နေ ရာထိ တက်ကြိတ်ပလိုက်မှာနော်” ဟု ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က လူမှုကွန်ရက် Twitter တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရေးသားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲဟု မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်ဟောင်း ရခိုင်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမား ဦးဖေသန်းကို မေးမြန်းရာသူကယခုလို ပြောကြားသည်။ “ အဲဒါတော့ အခြေအနေ မှန်းဆလို့မရဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေတွေက ထပ်ပြီးတော့ ဖြစ်လာရင်တော့ သူပြောသလို ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်” ဟု ပြော ဆိုသည်။ https://burmese.narinjara.com/news/detail/6274b84b8dfa1f53681b20f0
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ်မှ ဖမ်းဆီးခံရသည့် မူဆလင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးနှင့် ရခိုင်လူမျိုး ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးတစ်ဦးကို စစ်တွေမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ရန်စီစဉ်နေသည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းတို့ နှစ်ဦးမှာ စစ်တွေမြို့တွင် မေလ ၄ ရက်နေ့ကအဖမ်းခံရသော ဘောဒူဖကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရော်ဖီးလ်နှင့် ကြက်ကိုင်းတန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းလှစိန်တို့ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့နှစ်ဦးကို စစ်တွေအမှတ်(၁) ရဲစခန်းတွင်အမှုဖွင့်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု မနေ့က ဖမ်းဆီးခံရရာမှလွတ်လာသူ အမည်မဖော်လို သည့် မူဆလင်တစ်ဦးက နိရဉ္စရာသတင်းဌာကိုပြောသည်။ ထိုသို့အမှုဖွင့်မည်ကို စစ်တွေမြို့မရဲစခန်း အမှတ် ၁ စခန်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကို နိရဉ္စရာသတင်းဌာနမှ သွားရောက်မေးမြန်းရာ အမှုဖွင့်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
မနေ့ကလည်း AA ကို အမဲသားများ သွားရောက် ရောင်းချသည်ဟုဆိုကာ မေလ ၃ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးသွားသည့် မူဆလင်ရွာသား ၅ ဦးကို ခံဝန်ဖြင့် စစ်တပ်မှ မနေ့က ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ မကျည်းမြိုင်ရပ်ကွက် အကွက် ၉ မှ ဦးနာဂူ(ခ) ဦးမောင်ဘ၊ သက္ကယ်ပြင် ကျေးရွာမှ ဦးအီးစူး(ခ)ဦးလှမြင့်နှင့် ဦးကျော်နု၊ ဘောဒူဖကျေးရွာမှ ဦးနူရ်ဟူးဆောင်း (၆၉)နှစ်၊ ဒါးပိုင်ကျေးရွာမှ ဦးဆော်လိမ်း(ခ) စောနီတို့ဖြစ်ကြသည်။ https://burmese.narinjara.com/news/detail/6274afa88dfa1f53681b20ee
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ( KIO) မှ စစ်ကောင်စီမှ ဖိတ်ကြားထားသော ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကို မတက်ဟု ယနေ့ထုတ်ပြန် ကြေညာချက် ထွက်လာပြီးနောက် အေအေအပါအဝင် မြောက်ပိုင်းညီနောင် မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အနေဖြင့် ၎င်းဆွေးနွေးပွဲကို တက်/မတက်အပေါ် လူအများအာရုံစိုက်စရာဖြစ်လာနေသည်ဟု ကျောက်တော်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းဝင်းက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် ညီနောင်မဟာမိတ် သုံးဖွဲ့ဖြစ်သည့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) ၊ တအာင်း ( TNLA) နှင့် ကိုးကန့် (MNDAA) အဖွဲ့ ဆွေးနွေးတက်/မတက်ကို အများကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြပြီး လက်ရှိ စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌက ဖိတ်ကြားထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်ရေးမှာ အင်အားကြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ တက်/ မတက် အပေါ်တွင် မူတည်နေသည်ဟု သုံးသပ်မှုများလည်းရှိနေသည်။.
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အင်အားကြီးသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) သည် ထုတ်ပြန် ကြေညာချက် (၂/၂၀၂၂) ကို ယနေ့ မေလ ၅ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ရာတွင် စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဖိတ်ကြားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးမည် မဟုတ်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
စစ်ရေးအသံများမကြားရဘဲ တည်ငြိမ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ် ပန်းဈေးမြောင်းဘက်တွင် ယမန်နေ့ညက သေနတ်သံ ၁ဝ ချက်ခန့် ထွက်ပေါ်ခဲ့၍ ဒေသခံများအကြား စိုးရိမ်ခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါသေနတ်သံများသည် ယမန်နေ့ မေလ ၄ ရက် ည ၉ နာရီခန့်က ထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပန်းဈေးမြောင်းဘက်တွင် ငါးရှာ၊ ဖားရှာထွက်သူများကို ပန်းဈေးမြောင်း တစ်ဘက်ကမ်းရှိ ငွေခေါင်းပေါက်(ခေါ်) ငွေတောင်ပေါက်တောင်၌ စခန်းချထားသည့် အမှတ် (၃၁)ရဲတပ်ရင်း၏ ကင်းစခန်းက လှမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
သေနတ်သံများထွက်ပေါ်ခဲ့သည့် ပန်းဈေးမြောင်းသည် မြောက်ဦးမြို့နှင့် တစ်မိုင်ခန့်သာ ကွာဝေးပြီး ယင်းနေရာတွင် လူနေ အိမ်များထက် များသောအားဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်သူများသာ နေထိုင်ကြကြောင်း သိရ သည်။ လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ရေးအရတည်ငြိမ်နေသည့်အချိန်၌ ယခုကဲ့သို့သေနတ်သံများထွက်ပေါ်ခဲ့သည့်အပေါ်တွင် စိုးရိမ်မှုရှိကြောင်း ပန်းဈေးမြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက နိရဉ္စရာသို့ပြောသည်။
ယခုဖြစ်စဉ်ကြောင့် လူတစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်ပျောက်ဆုံးမှုမရှိခဲ့သော်လည်း ဒေသခံများအကြား စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများ ဖြစ်ခဲ့သည် ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။ ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သူရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ ပြောခွင့်ရသူ ဦးလှသိန်းတို့အား ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါ။ မြောက်ဦးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိုးစိုးသက်ကို ထပ်မံဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း မအားလပ်သေးဟု ပြောသည်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ပန်လင်ကျေးရွာအတွင်းတွင် နေထိုင်သည့် ကလေးငယ်နှစ်ဦးသည် မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိ ပြီး ဆေးကုသရန်အတွက် အခက်အခဲရှိနေကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၅ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်တွင် ကျေးရွာ နှင့် တစ်မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့် ယာတောဘက် မြင်းသွားရှာသည့် ပန်လင်ကျေးရွာမှ ကလေးငယ်နှစ်ဦးသည် မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပြီး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိသွား ကြောင်း သတင်းသိရသည်။
အဆိုပါ မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိသည့် ကလေးငယ်နှစ်ဦးကို အိုမ်တမာဝ် လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ သွားရောက် သယ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျောက်မဲမြို့နယ်မှ တစ်ဆင့် လားရှိုးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သတင်းသိရသည်။ ဒဏ်ရာရ ကလေးငယ်နှစ်ဦး သည် ကျေးလက်နေပြည်သူများဖြစ်သည့်အပြင် လက်လုပ်လက်စားမိသားစုဝင်များလည်းဖြစ်သည့်အတွက် ဆေးကုသမှု ခံယူ ရန်လည်း အခက်အခဲများရှိနေကြောင်း အိုမ်တမာဝ် လူမှုကူညီရေး အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကိုပြော သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှစတင်ကာ ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်းနှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်းတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မြေမြုပ်မှိုင်းများကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၁) ဦးရှိခဲ့ပြီး ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/28003
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး သံဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး ဒေါ်မြသိင်္ဂီသည် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ ဒေါ်မြသိင်္ဂီသည် မေ (၃)ရက်မှစတင်ပြီး CDM တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြောင်း ၎င်း၏ လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် အသိပေး ကြေညာထားလိုက်သည်။
အဆိုပါ တရားမဝင် စစ်အုပ်စုကို ကိုယ်စားပြုရန် ဆန္ဒမရှိခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည့် မြန်မာ နိုင်ငံ ပြည်သူများအပေါ် ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ် နှိမ်နင်းမှုများကို လုံးဝလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် CDM လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ပြည်သူ့ဘက်မှရပ်တည်ပြီး Civil Disobedient Movement (CDM) တွင် ပါဝင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူမက ရေးသားထားသည်။
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူဓမ္မဘက်မှသာ အခိုင်အမာရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တရားမျှတမှု၊ ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်မှုနှင့် အမှန်တရားတို့ကို အလိုရှိကြောင်း ဒေါ်မြသိင်္ဂီက ဆိုသည်။ ရွေးကောက်ခံ အရပ်သားအစိုးရ ကိုဖြုတ်ချပြီး အာဏာ သိမ်းလိုက်သည့် စစ်တပ်၏ လုပ်ရပ်ကို လက်မခံနိုင်သည့်အတွက် CDM လှုပ်ရှားမှုကို အာဏာသိမ်းပြီး ရက်ပိုင်းအကြာတွင် ဌာန အသီးသီးက ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/27996
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် ပန်ဆိုင်းမြို့နယ်ခွဲ မုံးပေါ် မိုင်ဖန်ကျေးရွာဘက်တွင် စစ်ကောင်စီနှင့် ကိုးကန့်တပ်မတော် (MNDAA) တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ယမန်နေ့ မေ (၄) ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်အချိန်တွင် စစ်ကောင်စီ တပ်စခန်းရှိရာနေရာကို ကိုးကန့်တပ်မတော် MNDAA တို့က လက်နက်ကြီးဖြင့် လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယမန်နေ့က MNDAA နှင့် စစ်ကောင်စီ တို့သည် မိနစ် (၂၀) ခန့်အကြာ တိုက်ပွဲအပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီလကုန်ပိုင်းတွင်လည်း ကိုးကန့်တပ်မတော် MNDAA နှင့် စစ်ကောင်စီတို့ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်မှုကြောင့် စီစီဝမ်တာပန် တောင် ခြေ၊ ဟူပန့်ရွာအနီးတွင် လက်နက်ကြီးကျရောက်မှုကြောင့် နေအိမ်တစ်ချို့ ပျက်စီးခဲ့ရသည့်အပြင် ကြံဧက (၁၀၀) နီးပါး လောင် ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/27990
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲကြောင့် TYN (Tai Youths Network) မှ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအပါအဝင် အရပ်သား သျှမ်းလူငယ်နှစ်ဦး ကျည်ထိမှန် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ စကစ ပေါ်တာဆွဲခံ ရပြီး ကျည်ထိသေဆုံးသွားသည့် သျှမ်းလူငယ် ၂ဦး ရုပ်အလောင်း မေလ ၄ ရက် ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင်တွင် မူဆယ်မြို့နယ် မော်တောင်းကျေးရွာအနီးတွင် TNLA တပ်ဖွဲ့ နှင့် စစ်ကောင်စီတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီဘက်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ ယောက် ကျဆုံးခဲ့ရသည့်အပြင် ပေါ်တာဆွဲခံရသည့် သျှမ်းလူငယ်နှစ်ဦးလည်း အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကောင်စီတို့၏ ပေါ်တာဆွဲခြင်းခံရပြီး TNLA တို့ ပစ်လိုက်သည့် လက်နက်ကြီးကြောင့် ထိမှန်သေဆုံးသွားရသည့် TYN အလုပ်အမှုဆောင်နှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူတို့၏ ရုပ်အလောင်းကို မူဆယ်မြို့မှ ပရဟိတ လူမှုကူညီရေးအသင်းများက သွားရောက် သယ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ထို တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်များနှင့် ပက်သက်ပြီး ဒေသခံများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ TNLA တပ်ဖွဲ့တို့သည် မော်တောင်းကျေးရွာအနီးရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင် နေရာယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်သား ပေါ် တာဆွဲလာသည့် အရပ်သားပြည်သူကားကို ပစ်ခတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မော်တောင်းကျေးရွာ ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ထို့အပြင် တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့် TYN မှ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်သည် သျှမ်းပြည်ညီညွှတ်ရေး ကော်မတီ (CSSU) မှ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ရပ်ရွာအရေး၊ စစ်ဘေးရှောင်အရေးကို ကူညီလုပ်ဆောင်နေသည့် လူငယ်ဖြစ်သည်။ တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (TNLA) တို့မှ စစ်ကောင်စီ မှ ပေါ်တာဆွဲပြီး အရပ်သားတင်ဆောင်လာသည့် ကားယာဉ်များပါမချန် တိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်မှုနှင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဖြစ်သည့် လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူ့ ယာဉ်များကို ပေါ်တာဆွဲမှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ သျှမ်းလူငယ် နှစ်ဦး အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်။
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးရုံး ယနေ့ (မေလ ၅ ) ရက် မနက် ၂ နာရီဝန်းကျင်တွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါ ပြည်ခိုင်ဖြိုးရုံးတွင် ရုံးတက်သူများမရှိကြောင်း သန့်ရှင်းရေးသမားနှင့် ညစောင့် ဝန်ထမ်းသာရှိကြောင်း သိရသည်။ တာချီ လိတ်မြို့သည် မကြာခဏ ဗုံးပေါက်ကွဲသံများ၊ သေနတ်ပစ်ခတ်သံများ ကြားနေရသဖြင့် ညပိုင်းချိန်တွင် အပြင်ထွက်သွားလာ မှုကို စိုးရိမ်နေရကြောင်း သိရသည်။
တာချီလိတ်မြို့သည် နိုင်ငံရေး နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပစ်ခတ်မှုသည် ယနေ့မနက်က ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် နေထိုင်သည့် PDF တပ်သား၏မိသားစုဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီက ဓားစာခံ အဖြစ် လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မူဆယ်မြို့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ အမဖြစ်သူကို စရဖက ယမန်နေ့ မေလ ၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ၄ နာရီဝန်းကျင်တွင် စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ စရဖက ၎င်း၏နေအိမ်သို့ ရွှေဝယ်ရန်ဟန်ဆောင်ပြီး လာရောက်ဖမ်းဆီးသွား ကြောင်းသိရသည်။ ထိုအမျိုးသမီးကို လက်ရှိမှာ ၅၀၅(က) ဖြင့်ဖမ်းဆီးသွားပြီး စရဖ စစ်ကြောရေး စခန်းတွင်တည်ရှိနေကြောင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က ထပ်လောင်းပြောပြသည်။
စစ်ကောင်စီက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် မိသားစုများကို ဓားစားခံအဖြစ်ထပ်မံဖမ်းဆီးလာပါက စစ်ကောင်စီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ ဝန်ထမ်းများ၊ ရဲများ၏ မိသားစုဝင်များကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားနိုင်ကြောင်း သျှမ်းမြောက် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကိုပြောသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/27964
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ငွန်အင်ကျေးရွာတွင် အမည်မသိလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် စောင့်နေသည့် စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ ဝန်ထမ်း (၃) ဦး ကို လာရောက်ပစ်ခတ်ပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ယမန်နေ့ မေလ (၃) ရက် ငွန်အင်ကျေးရွာ အနီးတွင် ည (၈) နာရီကျော်တွင် သစ်တောဝန်ထမ်းများ၊ မူးယစ်ဆိုင်ရာရဲဝန်ထမ်းများ ရှိနေစဉ် လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဝမ်ငွန်အင်ကျေးရွာသည် နမ့်ခမ်း – မိုင်းဝီး ကားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး သစ်တောများ၊ မူးယစ်များ မကြာခဏ ကားများ၊ ထော်လဂျီများကို လာရောက်စစ်ဆေးပြီး အခွန်များ ကောက်လျက်ရှိကြောင်း နမ့်ခမ်းဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
နမ့်ခမ်းမြို့နယ်သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အများအပြားလှုပ်ရှားရာ နယ်မြေဖြစ်ပြီး မကြာခဏပစ်ခတ်မှုများလည်း ရှိ သည့် နေရာဒေသဖြစ်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/27969
၁။ ပါဝငျသငျ့သူအားလုံး မပါသဖွငျ့ စဈကောငျစီ၏ ဆှေးနှေးပှဲ မတကျနိုငျကွောငျး KIO ထုတျပွနျ
၂။ ကှတျခိုငျ ကခငျြစဈရှောငျမြား နရောအသဈသို့ ပွောငျးရှရေ့နျ အကူညီလိုအပျနေ
၃။ မနျခိနျရပျကှကျ နအေိမျတဈအိမျတှငျ ရပျထားသညျ့ သုံးဘီးတဈစီး အခိုးခံရ
၄။ စဈတပျဝါဒဖွနျ့ MRTV မိုဘိုငျးအကျပလီကေးရှငျးကို Apple store နှငျ့ Google playstore တို့မှ ဖယျရှားခံရ
၅။ NUG အစိုးရ အှနျလိုငျးပညာရေးအစီစဉျတှငျ မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျမှ ကြောငျးသား ၁၈၀၀ ဝနျးကငျြ သငျယူနေ
၆။ ကာမိုငျး ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့တဈဦး ပဈသတျခံရ
၇။ မုံးပျေါတှငျ ယနညေ့ စဈကောငျစီနှငျ့ MNDAA တိုကျပှဲ ပွငျးထနျနေ
၈။ အလော့ဘှမျအနီးတှငျ စဈကောငျစီတပျမှ စဈရေး ပွငျဆငျမှုမြား ပွုလုပျနဟေု ဒသေခံမြားပွော
၉။ ဖားကနျ့တှငျ စဈကောငျစီ ပဈခတျသော လကျနကျကွီးကွောငျ့ ပွညျသူ ၂ ဦး သဆေုံး
၁၀။ စဈကောငျစီရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးတှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ ဖိတျချေါမှုက အခြိနျခါကောငျးမဟုတျကွောငျး KNPP ထုတျပွနျ
၁၁။ တျောလှနျရေး အောငျမွငျဖို့ တျောလှနျရေးအငျအားစုတှေ စုစညျးဖို့ လိုအပျနတေယျလို့ KNPP ပွော
၁၂။ မားခရျောရှေ့ ကြေးရှာနဲ့ ထားလဲကြေးရှာအကွားမှာ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့
၁၃။ မငျးအောငျလှိုငျ ဦးခေါငျးပုံကို တူမီးသနေတျနဲ့ ပဈခတျပွီး ကယားရိုးရာ စဈခူ(စပျခူ)ကို ပွုလုပျခဲ့
၁၄။ KNU တပျမဟာ ၅ တှငျ ဧပွီလအတှငျး တိုကျပှဲ ၃၀၀ ကြျောတှငျ စဈကောငျစီ ၂၀၀ နီးပါးနှငျ့ KNLA ၃ ဦးကဆြုံး
၁၅။ BGF ၏ ဖမျးဆီးခွငျးခံရသညျ့ ဒသေခံရှာသားမြား စဈကောငျစီအတှကျ ပျေါတာအဖွဈ ပို့ဆောငျခွငျးခံရ
၁၆။ ထနျးတပငျမွို့နယျရှိ PDF တပျစခနျးတဈခု တိုကျခိုကျခံရပွီး လကျနကျအခြို့ပါသှား
၁၇။ KNDO သို့ ဘကျပွောငျးသညျ့ ဗိုလျစလုံး ဦးဆောငျ DKBA တပျဖှဲ့ဝငျမြားကို ဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲ ပွုလုပျ
၁၈။ တော၊ တောငျကွားက စဈရှောငျတဈသောငျးကြျော စားနပျရိက်ခာ အရေးပျေါလိုအပျနေ
၁၉။ ဝငျးရျောဒသေမှ ဒသေခံအရပျသား ၁၀ ဦးခနျ့ စဈကောငျစီတပျ ဖမျးဆီးရိုကျနှကျသဖွငျ့ ပွငျးထနျဒဏျရာရရှိ
၂၀။ ငှလှေဲ၊ ငှလေဲလုပျဆောငျနသေူမြားကို စဈဆေးဖမျးဆီးနေ၍ လုပျငနျးရှငျမြားအခကျတှေ့
၂၁။ မတူပီမွို့တှငျ စဈကောငျစီတပျက အမြိုးသမီး ၆ ဦး အပါအဝငျ ပွညျသူ ၇ ဦး ဖမျးဆီး
၂၂။ မငျးတပျ-မတူပီကွား တိုကျပှဲ စဈကောငျစီဘကျ အနညျးဆုံး ၉ ဦးသဆေုံး
၂၃။ ဖလမျးမွို့နယျ ရမျထလိုကြေးရှာတှငျ စဈကောငျစီတပျက လူနအေိမျ ၇ လုံး မီးရှို့
၂၄။ ကလေးမွို့နယျတောငျပိုငျး ၂ ရကျတာတိုကျပှဲအတှငျး စဈကောငျစီတပျသားအနညျးဆုံး ၂၀ ဦးသဆေုံး
၂၅။ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုနှငျ့ ပွညျနယျဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံမူစစေ့ပျညှိနှိုငျးရေးဆှဲရေး ဖှဲ့စညျးတာဝနျပေးအပျခဲ့ကွောငျး မှနျ အမြိုးသားရေးရာညီလာခံ-၂၀၂၂ ထုတျပွနျ
၂၆။ AA တပျမှူးခြုပျဗိုလျခြုပျထှနျးမွတျနိုငျက အနောကျပိုငျးတိုငျးတိုငျးမှူးကို လူမှုကှနျရကျတှဈတာကနေ သတိပေးပွီး နောကျ ဖွဈလာမညျ့အကြိုးဆကျမှနျးဆ၍မရဟုဆို
၂၇။ AAကို ထောကျပံ့ကွေးပေးသညျဟုဆိုကာ ရခိုငျနှငျ့မူဆလငျအုပျခြုပျရေးမှူး ၂ ဦးကို အမှုဖှငျ့ရနျစီစဥျနေ
၂၈။ စဈကောငျစီဖိတျကွားသညျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲကိုမတကျဟု KIOကထုတျပွနျခကျြ ထှကျလာပွီးနောကျ ညီနောငျ မဟာမိတျသုံးဖှဲ့ ဆှေးနှေးပှဲတကျ/မတကျအပျေါလူအမြားအာရုံစိုကျစရာဖွဈလာ
၂၉။ မွောကျဦးတှငျ သနေတျသံ ၁ဝ ခကျြခနျ့ ထှကျပျေါခဲ့၍ ဒသေခံမြားအကွား စိုးရိမျခဲ့ရဟုဆို
၃၀။ ကြောကျမဲမွို့နယျ ကလေးငယျနှဈဦး မိုငျးနငျးမိပွီး ဆေးကုသဖို့ ခကျခဲနေ
၃၁။ ခငျြးမိုငျ မွနျမာကောငျစဈဝနျရုံး သံဝနျထမျးအမြိုးသမီးတဈဦး CDM ပါဝငျ
၃၂။ မုံးကိုးတှငျ စဈကောငျစီ နှငျ့ MNDAA တို့ တိုကျပှဲပွငျးထနျ
၃၃။ မူဆယျမွို့နယျတိုကျပှဲကွား စကစ ပျေါတာဆှဲသှားသညျ့ သြှမျးလူငယျ ၂ဦး ကညျြထိသဆေုံး
၃၄။ တာခြီလိတျမွို့ ရှိ ပွညျခိုငျဖွိုးရုံး ပဈခတျခံရ
၃၅။ မူဆယျမွို့ PDF မိသားစုဝငျတဈဦးကို စဈကောငျစီ မှ ဓားစာခံ အဖွဈဖမျးဆီး
၃၆။ နမျ့ခမျးမွို့နယျ စဈကောငျစီ လကျအောကျခံ ဝနျထမျး (၃) ဦး ပဈသတျခံရ
အာဏာသိမျး စဈကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ၏ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရေး ဖိတျချေါခကျြကို ပါဝငျမညျ မဟုတျ သေးကွောငျး ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO ဗဟိုကျောမတီ က ယနေ့ သဘောထားထုတျပွနျလိုကျသညျ။ ယခု တှဆေုံ့ဆှေးနှေး ပှဲတှငျ ပါဝငျသငျ့သော အဖှဲ့အစညျးမြားအားလုံးကို ဖိတျကွားမှုမရှိခွငျးနှငျ့ အပွုသဘောဆောငျသော ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲ ပွုလုပျသှားမညျသာဟု ကမျးလှမျးခကျြတှငျ ပါရှိသောကွောငျ့ တကျရောကျမညျမဟုတျကွောငျး ကခငျြလှတျလပျအဖှဲ့ KIO ဗဟို ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ဗိုလျမှူးကွီး နျောဘူ က KNG သတငျးဌာနကို ပွောဆိုခဲ့သညျ။
KIO/KIA သညျ တရားမြှတပွီး မှနျကနျသော ဆှေးနှေးပှဲကိုသာ လကျခံတှဆေုံ့ဆှေးနှေးသှားမညျဖွဈပွီး တိုငျးရငျးသားတျောလှနျ ရေးအဖှဲ့မြား၊ ပွညျသူရှေးကောကျတငျမွှောကျထားသညျ့ နိုငျငံရေးအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ စဈအာဏာရှငျ စနဈဆနျ့ကငျြတျောလှနျနေ သော ပွညျသူမြား၏ တောငျဆိုခကျြမြားကိုသာ ဦးစားပေးလုပျဆောငျသှားမညျဖွဈကွောငျးသူက ဆကျဆိုထားသညျ။ ယနေ့ ထုတျပွနျခကျြတှငျ အခကျြ ၅ ခကျြပါဝငျပွီး နံပါတျ ၄ အခကျြတှငျ ‘ပါဝငျသငျ့သူအားလုံးကို ဖိတျချေါခွငျးမရှိကွောငျး တှရှေိ့ခွငျး၊ နိုငျငံ၏ အရေးအရာမြားကို ဆှေးနှေးအဖွရှောမညျဟူသော သဘောထားမပါရှိသညျကိုတှရှေိ့ရပါသညျ’ဟု အဓိက ဖျောပွထား သညျ။
ထို့ကွောငျ့ နိုငျငံ၏ အရေးအရာမြားကို တနျးတူဆှေးနှေးနိုငျမညျ့ အခြိနျအခါအခငျးအကငျြးရောကျမှသာ ပါဝငျဆှေးနှေးမညျ ဖွဈကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။ ယနေ့ KIO ၏ ထုတျပွနျခကျြကို ပွညျသူအမြားစုလညျး ထောကျခံကွပွီး အာဏာရှငျအဆုံး သတျရေး ပိုမိုအားကောငျးလာတော့မညျဟု လူမှုကှနျရကျစာမကျြပျေါတှငျ ရေးသားဖျောပွနသေညျကို တှရေ့ပါသညျ။
ကှတျခိုငျ ဘုရားကြောငျးဝငျးမှာ ကာလကွာခိုလှုံခဲ့ရတဲ့ ကခငျြစဈရှောငျတှဟော အခကျအခဲရှိလာတဲ့အတှကျ နရောအသဈကို ပွောငျးရှဖေို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး နရောသဈကို ပွောငျးရှဖေို့ရာမှာ ကုနျကစြားရိတျ မြားပွားမှာ ဖွဈလို့ အကူ အညီတှေ လိုအပျနတေယျလို့ဆိုပါတယျ။ သူတို့အတှကျ နရောပွောငျးရှဖေို့ ဘယျအဖှဲ့အစညျးကမှ သီးသနျ့ နရောခထြားပေး တာမြိုး မရှိတဲ့အပွငျ လိုအပျနတေဲ့ငှပေမာဏဟာ အလှနျမြားပွားတဲ့အတှကျကွောငျ့ အခုလိုကူညီထောကျပံ့မှု လိုအပျနတောဖွဈ တယျလို့ ကှတျခိုငျ စဈရှောငျစခနျး ၁ မှ စဈရှောငျပွညျသူတဈဦး KNG သတငျးဌာန ကို ပွောပါတယျ။
မွနေရောအသဈမှာ ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျဖို့ တဈအိမျထောငျမှာ ငှကေပျြ (၂၅) သိနျးစီ ပေးရမှာဖွဈပွီး၊ လာမညျ့ ဇှနျလမှာ စခနျး အတှကျ စုစုပေါငျး ကပျြသိနျး (၇၀၀) ကြျောလိုအပျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ စဈရှောငျ အိမျထောငျစု စုစုပေါငျး (၄၀) ကြျောရှိ ပွီး၊ လူဦးရေ (၂၀၀) ကြျောရှိပါတယျ။ ဒီစဈရှောငျတှကေို ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ NLD အစိုးရက မွနေရောအသဈမှာ နအေိမျတှေ အထိ ဆောကျလုပျပေးဖို့ စီစဉျခဲ့ပမေယျ့ အာဏာသိမျးလိုကျတဲ့အတှကျကွောငျ့ အစီစဉျတှေ ပကျြပွယျသှားတယျလို့ သိရပါတယျ။
ကှတျခိုငျမွို့နယျအတှငျး စဈရှောငျစခနျး စုစုပေါငျး (၁၀) ခု ဝနျးကငျြခနျ့ရှိသညျ့အထဲက အခုစဈရှောငျတှကေ ကဘေီစီ စဈရှောငျ စခနျး (၁)က ဖွဈပါတယျ။ အခု စဈရှောငျမြားသညျ လှနျခဲ့သော ၂၀၁၂ ခုနှဈတှငျ စဈကောငျစီ နဲ့ ကအေိုငျအတေို့ကွား ရှမျးမွောကျ တခှငျတိုကျပှဲတှကွေောငျ့ နားခရိနျ၊ နောငျးပါ၊ ဂလောငျး၊ နမျးမား ကြေးရှာတှကေနေ အမြားစု ထှကျပွေးလာကွတာဖွဈပါတယျ။
ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားမွို့ မနျခိနျရပျကှကျ၊ အုပျစု (၅) အပိုငျးရှိ နအေိမျ၌ ရပျထားသညျ့ သုံးဘီးတဈစီး ယနနေံ့နကျ အစော ပိုငျးတှငျ အခိုးခံရ‌ မိသားစုမြားမှ သိရသညျ။
သုံးဘီး၏ တနျဖိုးမှာ ကပျြသိနျး ၅၀ ရှိပွီး ဝယျယူထားတာ မကွာသေးကွောငျး လကျရှိတှငျ သကျဆိုငျရာ ရဲစခနျးမြားကို တိုငျကွား တာမြိုး မရှိပဲ မိမိဘာသာ ရှာဖှနေကွေပွီး တဈပတျရဈ second ရောငျးတဲ့ဆိုငျမြားကိုလညျး အကွောငျးကွားထားသညျ ဟု သူမ က ဆကျပွောသညျ။
မွဈကွီးနားမွို့ မနျခိနျရပျကှကျ အုပျစု(၅) အပိုငျးတှငျ လှနျခဲ့သညျ့နှဈရကျ အင်ျဂါနေ့ မနကျပိုငျး လူအိပျခြိနျမှာပဲ ထိုဖွဈစဥျနှငျ့ ဆငျတူသညျ့ နအေိမျတဈအိမျမှ ဆိုငျကယျတဈစီး အခိုးခံရမှုဖွဈပှားခဲ့သေးသညျ။ အာဏာသိမျးပွီးနောကျ မွဈကွီးနားမွို့တှငျ ခိုးဆိုးလုနိုကျပိုမြားလာကွောငျး ဒသေခံမြား ပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/05/may5-sm2/
စဈကောငျစီတပျ၏ MRTV မိုဘိုငျးအကျပလီကေးရှငျးကို အှနျလိုငျးပျေါတငျပွီး တဈရကျအကွာမှာ Apple ကုမ်ပဏီ App store နှငျ့ Google playstore တို့မှ ဖွုတျခလြိုကျပွီဖွဈသညျဟု Justice for Myanmar က မလေ ၆ ရကျနတှေ့ငျ ဖျောပွထား သညျ။ နပွေညျတျောတှငျ မလေ ၄ ရကျနေ့ အခမျးအနားဖွငျ့ ဖှငျ့လှဈခဲ့သညျ့ စဈကောငျစီ၏ အပလီကေးရှငျကို Apps Web Social ကုမ်ပဏီ အနဖွေငျ့ store နှဈခုစလုံးမှ အလငျြအမွနျဖယျရှားမှုအပျေါကွိုဆိုပါသညျဟု Justice for Myanmar ကဆိုသညျ။
အကျပလီကေးရှငျး ရေးသားထုတျပွနျသညျ့ အမရေိကနျကုမ်ပဏီ Apps Web Social LLC ၏ နာမညျကို Justice for Myanmar က ဖျောထုတျပွောကွားပွီးနောကျ ကုမ်ပဏီက ယငျးအကျပလီကေးရှငျးမြားကို ဖွုတျခခြဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ စဈကောငျစီက မွနျမာ ပွညျသူမြားအပျေါ ၎င်းငျးတို့၏ စိတျဓါတျစဈဆငျရေးအစီအစဉျ၏ တစိတျတပိုငျးအဖွဈ သတငျးမှားမြားနှငျ့ အမုနျးစကားမြား ဖွနျ့ဝရေနျအတှကျ ယငျးအကျပလီကေးရှငျးကိုအသုံးပွုသညျဟု ထုတျပွနျထား သညျ။
Apple ကုမ်ပဏီနှငျ့ Google ၏ မိခငျကုမ်ပဏီဖွဈသညျ့ Alphabet တို့အနဖွေငျ့ စဈကောငျစီတို့၏ ပလကျဖောငျးမြားနှငျ့ ၎င်းငျးတို့ ထိနျးခြုပျထားသညျ့ အဖှဲ့အစညျးအားလုံးကို တားဆီးပိတျပငျရနျ Justice for Myanmar က ထပျမံတောငျးဆို ထားသညျ။ ကခငျြ ပွညျနယျ မွဈကွီးနားခရိုငျတှငျလညျး စဈတပျထုတျကုနျမြားဖွဈသညျ့ မွနျမာဘီယာ၊ ဒဂုံဘီယာ၊ အဘေီစီဘီယာ၊ စတဲ့ထုတျကုနျ မြားကို ရောငျးဝယျခွငျး၊ သယျယူပို့ဆောငျခွငျးမြား မလုပျရနျ ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO က ယခုနှဈဆနျးပိုငျးက စတငျပွီး ပိတျပငျခဲ့သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/06/may-6-sm-1/
အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနမှဦးစီးကာ သငျကွားနသေညျ့ ကွားကာလ အှနျလိုငျးပညာရေး အစီစဥျတှငျ မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျကောငျစီမှ ဖှငျ့လှဈသညျ့ ပညာရေးအစီအစဉျ ကြောငျးသူ၊ သားဦးရေ ၁၈၀၀ခနျ့ တကျရောကျနကွေောငျး မွဈကွီးနား တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားသမဂ်ဂ ယာယီ ဥက်ကဋ်ဌထံမှ သိရှိရသညျ။ စဈတပျ အာဏာသိမျးမူမဖွဈခငျ မွဈကွီးနား တက်ကသိုလျတှငျ ကြောငျးသားဦးရေ ၇ ထောငျရှိခဲ့သညျ့အနကျ လကျရှိ NUG အစိုးရ၏ ကွားကာလပညာရေး အစီစဉျတှငျ ကြောငျးသား/သူ ဦးရေ ၁၈၀၀ ခနျ့ သငျကွားနခွေငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
သငျကွားနသေော အစီစဉျမြားမှာ ၂၀၂၀ မတျလတှငျ ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ ရပျနားခဲ့ရသညျ့ ဒုတိယနှဈဝကျကိုအစမှ ပွနျလညျ သငျကွားပေးနသေညျ့အပွငျ ကြောငျးသူ၊သားမြားအနဖွေငျ့ သငျခနျးစာတဈခုပွီးတိုငျး နားလညျသငျယူမှုကို စဈဆေးသညျ့ အနဖွေငျ့ Assignment ထပျခွငျး၊ အခနျးဆုံးစာမေးပှဲမြားကို အှနျလိုငျးမှတဈဆငျ့ဖွဆေို‌ရကွောငျး သိရသညျ။ အောငျရှုံး စီစဈပွီး နောကျ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ ပညာရေးဝနျကွီးဋ်ဌာနမှပေးအပျသညျ့ ယာယီဘှဲ့ ထောကျခံစာနှငျ့ အတနျးပွီးဆုံးကွောငျး ထောကျခံစာမြားရရှိမညျ ဖွဈကွောငျး ဧပွီလ၁၅ရကျနကေ့ zoom မှ တဈဆငျ့ ဖှငျ့လှဈသညျ့ မွဈကွီးနားတက်ကသိုလျ ကွားကာလ အှနျလိုငျးပညာရေးအစီအစဥျဖှငျ့ပှဲတှငျ မွဈကွီးနား တက်ကသိုလျ ကောငျစီမှ ဆရာတဈဦးက ပွောဆိုထားသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ၂၀၂၀ ခုနှဈမှစကာ ကိုဗဈကပျဘေးကွောငျ့ တက်ကသိုလျမြား၊ ကြောငျးမြားပိတျထားခဲ့ရသညျ့အပွငျ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ရကျနမှေ့စကာ စဈကောငျစီတပျမှ အာဏာသိမျးလိုကျသညျ့နောကျ အစိုးရ၏ ယန်တရားလညျပတျမူ ရပျတနျ့နိုငျဖို့ ပညာရေးဝနျထမျးမြား၊ ဌာနဆိုငျရာဝနျထမျးမြား CDM ပွုလုပျခဲ့ကွပွီး စဈအာဏာရှငျအား ဆနျ့ကငျြဆန်ဒဖျောထုတျကာ တက်က သိုလျကြောငျး၊ အခွခေံပညာရေးကြောငျးမှ ကြောငျးသား၊သူမြားလညျး စဈကောငျစီမှ ဖှငျ့သညျ့ ကြောငျးမြားတှငျ တကျရောကျ ခွငျးမပွုဘဲ NUG အစိုးရ၏ ကွားကာလ ပညာရေးအစီစဉျတှငျ တကျရောကျသူမြားစှာ ရှိလာသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ ဖားကနျ့မွို့နယျ ကားမိုငျမွို့တှငျ ယနနေံ့နကျပိုငျး ၈နာရီဝနျးကငျြတှငျ စဈကောငျစီလကျအောကျခံ ကားမိုငျးဌာ နေ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့ဝငျ တဈဦး သနေတျပဈသတျခံလိုကျရကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
ပဈသတျခံရသူမှာ အသကျ ၅၈နှဈအရှယျရှိ ဦးဇျောဌေး ချေါသူဖွဈပွီး ကားမိုငျးမွို့မရပျကှကျရှိ မွန်ဒာလကျဖကျရညျဆိုငျအတှငျး ထိုငျနစေဉျ ဆိုငျကယျ မောငျနငျးလာသော လူ ၂ဦးက ဝငျရောကျပဈသတျသှားသညျဟု ကားမိုငျးဒသေခံတဈဦးက KNG သတငျး ဌာနကို အတညျပွုပွောဆိုသညျ။ အဆိုပါ ပဈသတျခံရသော ဦးဇျောဌေးကို မညျသညျ့အဖှဲ့က လာရောကျပဈသတျသှားသညျကို အသေးစိတျမသိရသေးဘဲ လကျရှိတှငျ ကားမိုငျးမွို့ အခွစေိုကျ စဈဗြူဟာအဖှဲ့ စဈကောငျစီတပျနှငျ့ရဲမြားက လာရောကျစဈဆေး မှုမြားရှိနကွေောငျး သိရပါသညျ။
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး ၊ မူဆယျမွို့နယျ မုံးပျေါ တှငျ ယနညေ့ ၉ နာရီဝနျးကငျြမှ မိုငျဖနျ ရှိ စဈကောငျစီ တပျမ ၉၉ နှငျ့ ကိုးကနျ့ MNDAA တို့ တိုကျပှဲ ပွငျးထနျနကွေောငျး သိရသညျ။
မုံးပျေါအောကျဘကျ ကပျရပျရှိ မိုငျဖနျကြေးရှာတှငျ စဈကောငျစီ တပျမ ၉၉ ကငျးစောငျ့အဖှဲ့ ၃၀ ဝနျးကငျြ ရှာထိပျနားရှိနစေဉျ MNDAA မှ သှားရောကျပဈခတျရာမှ တိုကျပှဲပွငျးထနျလာခွငျး ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
စဈတပျဘကျမှ လကျနကျကွီးမြားနဲ့ ပဈခတျမှုမြားရှိနသေောကွောငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြားမှာ ထှကျပွေးရနျ ခကျခဲနကွေောငျး ပွောသညျ။ မုံးပျေါဒသေတဈလြှောကျစဈတပျနဲ့ ကိုးကနျ့ MNDAA တပျဖှဲ့တို့ လတျတလော စဈရေးလှုပျရှားမြားပုံမှနျပွုလုပျ နပွေီး တိုကျပှဲမကွာခဏ ဖွဈပှားနသေညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/04/may-4-bs-1/
ကခငျြပွညျနယျ မိုးမောကျမွို့နယျ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA ဌာနခြုပျ နယျမွေ အလော့ဘှမျအနီးရှိ ရှနျထုနျးဘှမျ့တှငျ တပျစှဲထားသော စဈကောငျစီတပျမြားသညျ စခနျးတှငျး စဈရေးအတှကျ အရေးပါသော ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးမြား ပွုလုပျနေ ကွောငျး ဒသေခံမြား ပွောသညျ။ စဈကောငျစီတပျ၏ ဆောကျလုပျရေးသုံး ကားမြားသှားလာမှုအတှကျ စဈအငျအား ၁၀၀ ဝနျးကငျြခနျ့ဖွငျ့ လိုကျပါ လုံခွုံရေးပေးနကွေောငျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။
မွဈကွီနား- ဗနျးမျော ကားလမျးမကွီးပျေါရှိ နှမျးလနျ့ကြေးရှာအရှဘေ့ကျ ဒေါ့ဖုနျးယနျမွို့၏ တောငျဘကျတှငျရှိသော အဆိုပါ ဒသေတဈကွောတှငျ စဈကောငျစီတပျဘကျမှ စဈအငျအားတိုးခြဲ့ခွငျး နှငျ့ စဈရေးလှုပျရှားမှုမြား ပုံမှနျရှိနသေျောလညျး တိုကျပှဲသံ ငွိမျသကျနသေညျမှာ ၆ လခနျ့ ကွာရှိပွီဟု သိရသညျ။ ရှနျထုနျဘှမျ့သညျ စဈရေးအရ အရေးပါသော နရောတဈခုဖွဈပွီး လကျရှိ စဈကောငျစီတပျ၏ ခလရ ၁၄၂ ၊ ခမရ ၄၃၈၊ ခမရ ၃၂၀၊ ခမရ ၃၈၇ အပွငျ အခွားစဈကွောငျးမြားဖွငျ့ စခနျးခနြသေညျဟု သိရသညျ။ အဆိုပါ ရှနျထုနျးဘှမျ့သညျ ပွီးခဲ့သော ၂၀၂၁ ခုနှဈ မတျလတှငျ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA မှ တိုကျခိုကျသိမျးပိုကျခဲ့သော အလော့ဘှမျ့ (A Law Bum) စခနျး အနီးတှငျ တညျရှိသညျ။
လကျရှိ ကခငျြပွညျ နယျနမိတျအတှငျး စဈကောငျစီတပျနှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA တို့ကွား တိုကျပှဲသံမြား ငွိမျသကျနသေျောလညျး ကခငျြ စဈကိုငျးနယျစပျဘကျတှငျ KIA ဦးဆောငျသော PDF မြားဖွငျ့ စဈကောငျစီတပျတို့ တိုကျပှဲ ပုံမှနျဖွဈပှားနသေညျ။ စဈကောငျစီ ခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တိုငျးရငျးသားတျောလှနျရေးအဖှဲ့မြားကို ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ သူကိုယျတိုငျ တှဆေုံ့သှားမညျဖွဈပွီး တှဆေုံ့မညျ့အဖှဲ့မြားအနဖွေငျ့ မလေ ၉ ရကျနေ့ နောကျဆုံး စာရငျး ပေးရနျ ပွောဆိုထားသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/04/may-4-y-1/
ကခငျြပွညျနယျ၊ ဖားကနျ့မွို့နယျ လုံးခငျး မှျောပုံကြေးရှာတှငျ စဈကောငျစီပဈခတျသညျ့ လကျနကျကွီးကွောငျ့ ထမငျးဆိုငျပိုငျရှငျ နှငျ့ စြေးဝယျသူအမြိုးသားတဈဦး သဆေုံးခဲ့ကွောငျး လုံးခငျးကြေးရှာဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။ ယမနျနညေ့ ၈ နာရီခနျ့အခြိနျ တှငျ ဖားကနျ့မွို့နယျရှိ ဆနျခါဘကျမှ လုံးခငျးဘကျသို့ စဈကောငျစီတပျမှ လကျနကျကွီး နှဈလုံးပဈခတျခဲ့ရာ တဈလုံးကရြောကျ ပေါကျကှဲခဲ့ပွီး ယငျးပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ ထမငျးဆိုငျပိုငျရှငျ ဦးရုံဂှအေသကျ ၅၀ နှဈနှငျ့ စြေးလာဝယျသူအမြိုးသားတဈဦး လကျနကျ ကွီးကညျြထိမှနျ ပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးခဲ့ကွောငျး လုံးခငျး မှ အမြိုးသားတဈဦးက ပွောသညျ။
လကျနကျကညျြထိမှနျသဆေုံးသှားသူ နှဈဦးမှာ ထမငျးဆိုငျပိုငျရှငျ ဦးရုံဂှနှေငျ့ ဈေးဝယျသူ ဦးမောငျမွငျ့ အသကျ ၄၅ နှဈတို့ဖွဈ ကွောငျး သိရပွီး ရုပျအလောငျးအား ယနေ့ သဂွိုလျလိုကျပွီ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ဒသေခံမြား၏ ပွောဆိုခကျြအရ ည ၇ နာရီ ဝနျးကငျြတှငျ မဇှပျယနျကြေးရှာဘကျမှ လကျနကျကွီးသံမြား ဦးစှာကွားခဲ့ရပွီး ည ၈ နာရီဝနျးကငျြတှငျမူ မှျောပုံထမငျးဆိုငျရှေ့ ကရြောကျပေါကျကှဲမှသာ စဈကောငျစီဘကျမှ ပဈခတျနခွေငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျဟု ဒသေခံ ၁ ဦးက ပွောသညျ။
လကျနကျကွီးကကြှဲသညျ့ မှျောပုံနှငျ့ မဇှပျယနျအကဉျြးထောငျသညျတဈမိုငျခနျ့မြှသာကှာဝေး‌ကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ ဖားကနျ့တှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ အပတျတှငျလညျး စဈကောငျစီတပျက ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA တပျမဟာ ၉ ဘကျသို့ လကျနကျကွီး ပဈခတျမှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2022/05/04/may-4-z-1/
တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှနေဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးတှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ စဈကောငျစီကနပွေီး ဖိတျချေါမှုတှဟော တဈနိုငျငံလုံး လှမျးခွုံမှုမရှိသလို၊ နိုငျငံရေးအကွပျအတညျးတှကေို ကွိုးစားဖွရှေငျးဖို့အတှကျမဟုတျတာကွောငျ့ တှဆေုံ့ဖို့အခြိနျကောငျး မဟုတျဘူးလို့ ကရငျနီအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ (KNPP)က မလေ ၅ရကျနမှေ့ာ ထုတျပွနျပါတယျ။
နိုငျငံရေး အကွပျအတညျးကို ဖွရှေငျးဖို့ ဖယျဒရယျဒီမိုကရစေီပွညျထောငျစုကို သဘောတူလကျခံတဲ့ အငျအားစုအားလုံး ဖိတျချေါ ဖို့ လိုအပျတယျလို့ လညျးပါရှိပါတယျ။ တဈနိုငျငံလုံး တျောလှနျနတေဲ့အငျအားစုအားလုံးပါဝငျတဲ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှု ဖွဈပျေါလာဖို့ အတှကျ KNPPကနပွေီး အခကျြ(၃)ခကျြ တောငျးဆိုထားပါတယျ။ တောငျးဆိုခကျြတှထေဲမှာ စဈကောငျစီတပျကနပွေီး စဈရပျ ဆိုငျးဖို့၊ စဈရှောငျတှကေို ကူညီမယျ့နိုငျငံတကာကူညီပံ့ပိုးတဲ့အဖှဲ့အစညျးတှကေို တရားဝငျလှတျလပျစှာ ကူညီဆောငျရှကျခှငျ့ပွု ဖို့အပွငျ မတရားသတျဖွတျခံရတဲ့ လူထုတှအေတှကျ စဈကောငျစီတပျက ကြူးလှနျသူတှကေို တာဝနျယူမှု၊ တာဝနျခံမှုအပွညျ့နဲ့ ဥပဒအေရ အရေးယူဆောငျရှကျဖို့ တောငျးဆိုထားပါတယျ။
စဈကောငျစီကို တျောလှနျနတေဲ့ တျောလှနျရေးအငျအားစုတှအေနနေဲ့ စုစညျးပွီး ပူးပေါငျးမှသာလြှငျ အမွနျဆုံးအောငျမွငျနိုငျ မယျလို့ ကရငျနီအမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ KNPP ရဲ့ အမွဲတမျး ပါတီဗဟိုကျောမတီဝငျ ရီမာနျထူးက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ တျောလှနျရေးကွနျ့ကွာခွငျးရဲ့ အဓိကအခကျြမှာ အငျအားစုမြား ကှဲပွားနခွေငျးဖွဈပွီး လကျနကျခဲယမျးမြား ခကျခဲနခွေငျး ကွောငျ့လညျး ကွနျ့ကွာနတောဖွဈတယျလို့ ရီမာနျထူးက ဆကျပွောပါတယျ။
အာဏာသိမျးပွီးနောကျ ပျေါပေါကျလာတဲ့ တျောလှနျရေးတပျဖှဲ့ တဈခုဖွဈတဲ့ အမြိုးသားညီညှတျရေး အစိုးရ (NUG) လမျးညှနျမှု အောကျက ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျ-ဒီးမော့ဆို (DMO_PDF) ကလညျး လကျရှိ တျောလှနျတိုကျပှဲဝငျနတေဲ့အပျေါ စဈဗြူဟာ ပိုငျးမှာ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျဖို့လိုတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ လကျရှိ ကရငျနီပွညျမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ တိုကျပှဲတှမှောဆိုရငျလညျး တပျဖှဲ့ တှမြေားတဲ့အတှကျ အခကျအခဲတှရှေိတယျလို့ ကရငျနီအမြိုးသားမြား ကာကှယျရေးတပျ (KNDF) တာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောပါ တယျ။ အာဏာသိမျးပွီးနောကျပျေါလာတဲ့ တျောလှနျရေးတပျဖှဲ့ (၆)ဖှဲ့နဲ့ စုဖှဲ့ခဲ့တဲ့ ကရငျနီတျောလှနျရေး တပျပေါငျးစု (KRU) ကတော့ အားလုံးစုစညျးဖို့ အရေးကွီးသလို ဘယျအခြိနျမှာ တိုကျပှဲဖွဈပှားမယျဆိုတာကို ခနျ့မှနျးလို့မရတာကွောငျ့ နရောဒသေ ခငျြးမတူညီတဲ့ တျောလှနျရေးအငျအားစုတှအေနနေဲ့ မွပွေငျမှာ စုစညျးဖို့ခကျခဲတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ၂၀၂၁ ဖဖေျောဝါရီ (၁) ရကျနေ့ အာဏာသိမျးမှု မရှိခငျကတညျးကဆိုရငျလညျး ကရငျနီပွညျမှာ စဈတပျကို လကျနကျကိုငျတျောလှနျ နကွေတဲ့ ပွညျသူ့ ကာကှယျရေးအဖှဲ့ တှရှေိပါတယျ။
ကရငျနီပွညျမှာ လကျနကျကိုငျတျောလှနျရေး တပျဖှဲ့တှဖွေဈတဲ့ ကရငျနီအမြိုးသားမြားကာကှယျရေးတပျ (KNDF) ၊ ပွညျသူ့ ကာကှယျရေးတပျ- ဒီးမော့ဆို (DMO-PDF) ၊ ကရငျနီတျောလှနျရေး တပျပေါငျးစု (KRU) ၊ ဖရူဆို PDF ၊ လှိုငျကျော PDF ၊ မိုးဗွဲ PDF ၊ ဖယျခုံ PDF ၊ KPDF စတဲ့ အဖှဲ့တှဟော အာဏာသိမျးပွီးနောကျပျေါပေါကျလာတဲ့ တပျဖှဲ့တှေ ဖွဈပါတယျ။ နှဈပေါငျး ၇၀ ကြျောကွာတျောလှနျရေးလုပျလာတဲ့ ကရငျနီတပျမတျော (KA) ကနလေညျး ခှဲထှကျသှားတဲ့ လကျနကျကိုငျအစုအဖှဲ့တှေ ရှိနေ သလို အဲ့ဒီအစုအဖှဲ့တှေ ပွနျစုစညျးဖို့ ကွိုးပမျးတာတှေ လညျး ရှိပါတယျ။ https://www.kantarawaddytimes.org/
ယမနျနေ့ မလေ ၃ရကျနကေ့ ဖရူဆိုမွို့နယျ မားခရျောရှကြေ့ေးရှာနဲ့ ထားလဲကြေးရှာအကွားမှာ စဈကောငျစီနဲ့ ကရငျနီဒသေခံ ကာကှယျရေး ပူးပေါငျးတပျဖှဲ့တို့ ၁နာရီကွာ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ ဒသေခံတဈဦးဆီကနသေိရပါတယျ။ တိုကျပှဲအပွီး စဈကောငျစီက ၁၂၀မမ၊ ၆၀မမ လကျနကျကွီးတှနေဲ့ ပဈခတျခဲ့တဲ့အတှကျ တိုကျပှဲဖွဈပှားတဲ့နရောအနီးက ဒေါပိုရှကြေ့ေးရှာကို ကရြောကျခဲ့ပွီး နအေိမျနှဈလုံး ပကျြစီးသှားတယျလို့ ၎င်းငျးကဆကျပွောပါတယျ။
စဈကောငျစီနဲ့ KA၊ KNDF B-15တို့ မနကျ ၁၀နာရီ ၄၀ မိနဈကနေ တိုကျပှဲစတငျဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီး စဈကောငျစီဘကျက ၂ဦး ထကျမနညျး သဆေုံးသှားတယျလို့ KNDF B-15 ထုတျပွနျထားပါတယျ။ ကရငျနီပွညျမှာ စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး စဈ ကောငျစီနဲ့ ကရငျနီဒသေခံ ကာကှယျရေးပူးပေါငျးတပျဖှဲ့တို့ နစေ့ဉျနီးပါး တိုကျပှဲဖွဈပှားနပေါတယျ။
တိုးတကျသောကရငျနီပွညျသူ့အငျအားစု ( PKPF )ရဲ့ ၂၀၂၂ခုနှဈ ဧပွီလ ( ၃၀ )ရကျနအေ့ထိ ကောကျယူထားတဲ့ စာရငျးအရ တိုကျပှဲပေါငျး ၂၇၄ကွိမျဖွဈပှားပွီး စဈကောငျစီဘကျက ၁၀၆၅ဦးသဆေုံးသလို ကရငျနီဒသေခံ ကာကှယျရေးပူးပေါငျးတပျဖှဲ့ ဘကျက ၁၁၆ဦး ကဆြုံးသှားတယျလို့ ထုတျပွနျထားပါတယျ။ https://www.kantarawaddytimes.org/
မလေ ၁ရကျနကေ့ ကယားလူမြိုးတို့ရဲ့ ရိုးရာဓလအေ့ရ မကောငျးတဲ့ ဝိဉာဉျတှကေို နှငျထုတျတဲ့ စဈခူ(စပျခူ) ပွုလုပျရာမှာ အဖွူရောငျကွကျနဲ့အတူ စဈကောငျစီ ဥက်ကဌ မငျးအောငျလှိုငျရဲ့ ပုံကို အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ။ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျအတှငျး တဈနရောမှာ ပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး အဆိုပါ ကွကျဖွူ ဦးခေါငျး နဲ့ မငျးအောငျလှိုငျရဲ့ ဦးခေါငျးပုံကို တူမီးသနေတျဖွငျ့ ပဈခတျခဲ့တာပါ။ စဈခူ( စပျခူ )မှာ မငျးအောငျလှိုငျဓာတျပုံရဲ့ခေါငျးကို တူမီးသနေတျနဲ့ပဈခဲ့တဲ့အတှကျ သူဟာ ဦးခေါငျးကို သနေတျနဲ့ ပဈခံရပွီး သဆေုံးသှား မှာဖွဈတယျလို့ ယုံကွညျကွောငျး စဈခူ( စပျခူ )မှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ဒီးမော့ဆိုအရှဘေ့ကျခွမျးမှာ စဈရှောငျနတေဲ့ ခူတီရယျက ပွောပါ တယျ။
ကယားလူမြိုးတှဟော မိမိတို့ နအေိမျအတှငျး သို့မဟုတျ ကြေးရှာအတှငျးမှာ မကောငျးတဲ့ ကိစ်စကွုံလာရပွီဆိုရငျ စဈခူ(စပျခူ) ကိုပွုလုပျလရှေိ့ပွီး မကောငျးဆိုးဝါး ဝိဉာဉျကို နှငျထုတျလရှေိ့ကွတာပါ။ မကောငျးတဲ့ဝိဉာဉျတှကေို မောငျးထုတျလိုကျရငျ ကံကောငျးခွငျးတှေ ပွနျရောကျလာမယျလို့လညျး ယုံကွညျကွပါတယျ။ လကျရှိကရငျနီပွညျမှာ ဖမျးဆီး၊ သတျဖွတျခံနရေတဲ့ ပွညျသူတှေ၊ စဈရှောငျရငျးမသသေငျ့ပဲ သဆေုံးနရေတဲ့ ပွညျသူတှေ နစေ့ဉျနဲ့ အမြှရှိနပွေီး ဒီအကွောငျးရငျးတှရေဲ့ တရားခံဟာ အာဏာသိမျးခေါငျးဆောငျ မငျးအောငျလှိုငျ ဖွဈတာကွောငျ့ အခုလို ပွုလုပျတာဖွဈတယျ လို့ ခူတီရယျက ပွောပါတယျ။
ကရငျနီပွညျမှာ စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး စဈကောငျစီနဲ့ ကရငျနီဒသေခံကာကှယျရေး ပူးပေါငျးတပျဖှဲ့တို့ တိုကျပှဲတှဖွေဈ ပှားကွပါတယျ။ စဈဘေးရှောငျနရေတဲ့ ဒသေခံ နှဈသိနျးနီးပါးရှိနပွေီး အိုးအိမျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျနသေူ အမြားအပွားရှိ ပါတယျ။ https://www.kantarawaddytimes.org/
KNU-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး၊ တပျမဟာ(၅) နယျမွေ၌ ဧပွီလတဈလအတှငျး တိုကျပှဲပေါငျး ၃၀၀ ကြျောဖွဈပှားခဲ့ရာတှငျ စဈကောငျစီဘကျမှ ၂၀၀ နီးပါးနှငျ့ KNLA ဘကျက ၃ ဦးကဆြုံးခဲ့ကွောငျး KNU တပျမဟာ (၅)က ထုတျပွနျသညျ့ လစဉျတိုကျပှဲ စာရငျးခြုပျအရ သိရသညျ။
ကရငျအမြိုးသားလှတျမွောကျရေးတပျမတျော (KNLA) တပျမဟာ ၅ နှငျ့ စဈကောငျစီ၊ နယျခွားစောငျ့ တပျ (BGF) ပူးပေါငျး တပျတို့အကွား ပွီးခဲ့သညျ့ဧပွီလအတှငျး တိုကျပှဲပေါငျး (၃၈၃) ကွိမျဖွဈပှားခဲ့ရာတှငျ စဈကောငျစီဘကျမှ ၁၇၃ ဦးသဆေုံးကာ ၈၇ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး၊ သဆေုံးသူမြားထဲတှငျ တပျရငျးမှူးတဈဦး၊ ဒု-တပျရငျးမှူးတဈဦး၊ တပျကွပျကွီး ၂ ဦးနှငျ့ တပျကွပျအဆငျ့တဈဦးပါဝငျကွောငျးနှငျ့ KNLA ဘကျတှငျမူ ၃ ဦးကဆြုံးကာ ၁၆ ဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ ထို့အပွငျ စဈကောငျစီဘကျမှ အသုံးပွုသညျ့ ထောကျပို့တံတား ၃ စငျး၊ ထောကျပို့ယာဉျ (၄)စီး၊ လကျနကျသို လှောငျရုံ (၂)လုံးကို တိုကျခိုကျဖကျြဆီးနိုငျခဲ့ကွောငျးနှငျ့ စဈကောငျစီဘကျမှ လကွေောငျး တိုကျခိုကျမှုဖွငျ့ ပွနျလညျတုနျ့ပွနျရာ တှငျ ဗုံး ၇ လုံးလာရောကျ ကွဲခခြဲ့သလို လကျနကျကွီးဖွငျ့ ၆၁၄ ကွိမျပဈခတျခဲ့ကွောငျးလညျး KNU တပျမဟာ ၅ ထုတျပွနျခကျြ တှငျ ဖျောပွပါရှိသညျ။
KNU တပျမဟာ ၅ ၏ ထုတျပွနျခကျြအရ ယခုဧပွီလအတှငျးဖွဈပှားခဲ့သညျ့ တိုကျပှဲမြားသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ မတျလထကျ တိုကျပှဲ အကွိမျရပေိုမြားသလို စဈကောငျစီဘကျမှလညျး ထိခိုကျသဆေုံးမှု ပိုမြားသညျကို တှရှေိ့ရသညျ။ မတျလအတှငျး တိုကျပှဲပေါငျး (၃၅၉) ကွိမျဖွဈပှားရာတှငျ စဈကောငျစီနှငျ့ BGF တပျဖှဲ့ဝငျပေါငျး (၁၁၈) ဦး သဆေုံးခဲ့ကွောငျး ယခငျလ KNU တပျမဟာ (၅)ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ https://kicnews.org/2022/05/
သံလှငျမွဈအနောကျခွမျးရှိ ကြေးရှာ (၈)ရှာတှငျ ယခု မလေဆနျး ၁ ရကျနကေ့ ကရငျပွညျနယျ၊ နယျခွားစောငျ့တပျ(BGF) အမှတျ (၁၀၁၄) တပျရငျး၏ ဖမျးဆီးခွငျးခံခဲ့ရသညျ့ ဒသေခံကြေးရှာသား ၁၀၀ ဦးဝနျးကငျြထဲမှာ ၅၀ ဦးခနျ့ကို စဈကောငျစီတပျ၏ ဝငျးတာပနျနှငျ့ လေးကစေခနျးသို့ပို့ဆောငျမညျ့ စဈကူမြားနှငျ့အတူပျေါတာအဖွဈ ပို့ဆောငျခွငျးခံလိုကျရကွောငျး ဒသေခံကြေး ရှာသားမြားထံမှ သိရသညျ။
သံလှငျမွဈအနောကျခွမျး မွိုငျရှာ၊ ကုနျးတနျးကွီးရှာ၊ ဝဲပြံခြောငျးဝရှာ ၊ ဘုရားဆိပျရှာ၊ ဝဲပြံရှာ၊ ပပေငျဆိပျရှာ၊ မိထ်ထီလာရှာနှငျ့ မိဇိုငျးရှာစသညျ့ ကြေးရှာမြားထဲသို့ မလေ ၁ ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးက BGF အမှတျ ၁၀၁၄ တပျရငျးမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ အိမျစီး ကားကွီး ၆ စီး ၊ အငျအား ၅၀ ခနျ့ဖွငျ့ ကြေးရှာ ၀ငျလမျး၊ ထှကျလမျးမြားအား ပိတျဆို့ကာ သနေတျပဈဖောကျ၍ ဒသေခံ ရှာသားမြားနှငျ့ လူငယျမြားအား အကွောငျးမဲ့ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားမှုဖွဈစဉျ ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးအပွငျ လတျတလော တှငျ ပပေငျဆိပျ၊ ဝဲပြံကြေးရှာဘကျတကြောနှငျ့ သံလှငျမွဈ တဈဖကျကမျး ရှဂှေနျး၊ သံလှငျမွဈအလယျရှိ ကော့လုံကြှနျး ဘကျမြားတှငျ ဗိုလျတငျဝငျးဦးစီးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက ဂိတျမြားဖှငျ့၍ စဈဆေးမှုမြားပွုလုပျနပွေီး ပုနျးရှောငျနသေူမြားကို စဈဆေး ဖမျးယူမှုမြား ပွုလုပျနသေောကွောငျ့ လူငယျမြားအနဖွေငျ့ နစေရာ၊ သှားစရာမရှိဖွဈစကွေောငျးလညျး အဆိုပါ ဝဲပြံဒသေခံ က ဆကျပွောသညျ။
BGF တပျဖှဲ့ဝငျမြားမှ ထိုဒသေမြားတှငျ ဖမျးဆီးစဈဆေးမှုမြား ဆကျလကျလုပျဆောငျနဆေဲဖွဈသောကွောငျ့ ဒသေခံရှာသား မြားအနဖွေငျ့ မိမိနရေပျဒသေကြေးရှာမြားတှငျ တိုကျပှဲမဖွဈပှားသျောလညျး အတငျးအဓမ်မ ဖမျးဆီးခံရခွငျးနှငျ့ စဈမှုထမျးခိုငျး ခွငျးအပွငျ ပျေါတာအထမျးသမားအဖွဈ ခိုငျးစခေံရခွငျး အပွုမခံရစရေနျ ပုနျးအောငျးရှောငျတိမျးနထေိုငျကွရသလို အသကျ အန်တရာယျကွုံကွရမညျကိုလညျး စိုးရိမျပူပနျမှု မွှငျ့တကျနကွေကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။ ယခုကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ဖွဈစဉျအသေးစိတျကို သိရှိနိုငျရနျ သကျဆိုငျရာ နယျခွားစောငျ့တပျ-BGF တာဝနျရှိသူမြားကို ဆကျသှယျမေးမွနျး၍ မရရှိပေ။
ကအေဲနျယူ-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး တောငျငူခရိုငျ၊ တပျမဟာ(၂) နယျမွေ(ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး )ထနျး တပငျမွို့နယျရှိ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့-PDF စခနျးတဈခုကို ယမနျနေ့ မလေ (၄)ရကျနတှေ့ငျ စဈကောငျစီတပျ၏ အငျအားသုံးဝငျရောကျ တိုကျခိုကျခံရသညျ့အတှကျ လကျနကျအခြို့ပါသှားသညျဟု သိရသညျ။
ယမနျနေ့ ညနေ (၄) နာရီဝနျးကငျြတှငျ စဈကောငျစီတပျအငျအား (၅၀) ကြျောသညျ လကျနကျကွီး လကျနကျ ငယျမြားဖွငျ့ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျသညျ့အတှကျ စခနျးရှိ ကရငျအမြိုးသားလှတျမွောကျရေးတပျမတျော -KNLA တပျရငျး(၆)တပျဖှဲ့ဝငျနှငျ့ PDF တပျဖှဲ့ဝငျမြား စခနျးကိုစှနျ့ခှာပေးရပွီး လကျနကျအခြို့လညျး စဈကောငျစီတပျလကျထဲပါသှားသညျဟု နယျမွခေံ PDF နှငျ့နီး စပျသူတဈဦးက ပွောသညျ။
ထိုစခနျးကို ဝငျရောကျမတိုကျခိုကျခငျ နံနကျ (၅)နာရီဝနျးကငျြတှငျလညျး နယျကြျောလာသညျ့ စဈကောငျစီ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ PDF တပျဖှဲ့တို့အကွား ဘယျထိကြေးရှာအုပျစု ထီးခီးအနီးတှငျ ထိတှပေ့ဈခတျတိုကျခိုကျမှု ဖွဈပှားခဲ့သေးသညျဟုလညျး သိရ သညျ။ https://kicnews.org/2022/05/
ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီလ ၂၆ ရကျနကေ့ ကရငျအမြိုးသားကာကှယျရေးတပျမတျော-KNDO ဘကျသို့ ဘကျပွောငျးဝငျရောကျလာသညျ့ ဗိုလျစလုံးဦးဆောငျသော ဒီမိုကရစေီအကြိုးပွုကရငျတပျမတျော-DKBA တပျဖှဲ့ဝငျမြားကို ယနေ့ မလေ ၅ ရကျနတှေ့ငျ ကွိုဆို ဂုဏျပွုပှဲပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ တပျဖှဲ့ဝငျ အငျအား ၂၀၀ ကြျောပါ အဆိုပါ DKBA တပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ဗိုလျမှူးခြုပျ စောနယျဒါးဘိုမွ ဦးဆောငျသညျ့ KNDO တပျဖှဲ့ထံသို့ ဘကျပွောငျးဝငျရောကျလာခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ဗိုလျမှူးခြုပျ စောနယျဒါးဘိုမွ ကိုယျတိုငျလကျခံကွိုဆိုခဲ့ကာ ၎င်းငျးတို့ကို KNDO တပျဖှဲ့ဝငျမြားအနဖွေငျ့ ဘကျတံဆိပျမြားပွောငျးလဲပေးခဲ့ပွီး ရာထူးနှငျ့ တာဝနျ မြားကိုလညျး ပေးအပျလိုကျကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ဘကျပွောငျးဝငျရောကျလာသညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျအသဈမြားကို KNDO ၏ ကှနျမနျဒို တပျရငျးအနဖွေငျ့ ဖှဲ့စညျးပေးလိုကျပွီး ဗိုလျစလုံးကို တပျရငျးမှူး တာဝနျပေးအပျကာ ဦးစီးစမေညျဖွဈကွောငျးလညျး ပွီးခဲ့သညျ့ရကျပိုငျးတှငျ ဗိုလျမှူးခြုပျ စောနယျဒါး ဘိုမွက ပွောဆိုထားသညျ။ လတျတလော ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး-KNU၊ ဒူးပလာယာခရိုငျ၊ တပျမဟာ (၆) နယျမွေ ဒေါနအရှခွေ့မျးဒသေအတှငျး ဖွဈပျေါနသေညျ့ တိုကျပှဲမြားတှငျ ဗိုလျစလုံး ဦးဆောငျသညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ပါဝငျတိုကျခိုကျ နခွေငျးဖွဈပွီး ပွညျသူလူထုအတှကျတိုကျပှဲ ဝငျနခွေငျးဖွဈသညျ့အပျေါ ပွညျသူလူထုမြား၏ ဆန်ဒနှငျ့အညီ ယခုလို KNDO တပျဖှဲ့ဝငျမြားအဖွဈ ပွောငျးလဲရခွငျးဖွဈကွောငျး ဗိုလျစလုံးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောဆိုထားသညျ။
စဈအာဏာသိမျးမှုနောကျပိုငျး စဈကောငျစီကို လကျနကျကိုငျပွနျလညျခုခံတိုကျခိုကျရာတှငျ ယခငျက DKBA မှ မပါဝငျခဲ့သျော လညျး နောကျပိုငျးတှငျ DKBA စဈကွောငျးမှူးဖွဈသူ ဗိုလျစလုံးက ၎င်းငျးထံ ခိုလှုံလာသညျ့ ပွညျမအတှငျးလူငယျမြားပါဝငျ၍ နယျမွခေံ KNDO၊ KNLA တပျရငျးတပျဖှဲ့မြားနှငျ့ ပူးပေါငျး၍ ပါဝငျတိုကျပှဲဝငျခဲ့သညျ။ ထိုသို့ တိုကျပှဲဝငျခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ၎င်းငျး ဗိုလျစလုံး တပျစခနျးတညျရှိရာ သောငျရငျးမွဈကမျးနရောကို ပွီးခဲ့သညျ့ ဇနျနဝါရီလ ၁၂ ရကျနကေ့ နယျခွားစောငျ့တပျ (BGF)နှငျ့ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျမြားပူးပေါငျး၍ မွပွေငျနှငျ့ဝဟေငျပါပူးပေါငျး၍ အပွငျးအထနျစဈကွောငျးထိုးတိုကျခိုကျခံခဲ့ရပွီး တပျဖှဲ့ဝငျ အခြို့ ကဆြုံးခဲ့ရသေးသညျ။ https://kicnews.org/2022/05/
ကအေဲနျယူ-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး သထုံခရိုငျ တပျမဟာ-၁နယျမွေ၊ ဘီးလငျးမွို့နယျတှငျ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေ သညျ့ စဈဘေးရှောငျအရပျသားပွညျသူ တဈသောငျးကြျောအတှကျ စားနပျရိက်ခာ အရေးပျေါလိုအပျနသေညျဟု ခရိုငျစဈရှောငျ ကူညီကယျဆယျရေးကျောမတီထံမှ သိရသညျ။
အဆိုပါ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ စားနပျရိက်ခာမြား အရေးပျေါအကူအညီလိုအပျသညျ့အပွငျ စဈရှောငျမြားအကွား ဝမျးပကျြ ဝမျးလြှောရောဂါဖွဈပှားခွငျး၊ သကျကွီးရှယျအို၊ နာတာရှညျရောဂါရှိသူနှငျ့ လဖွေတျရောဂါခံစားရသူပါဝငျခွငျးနှငျ့ စဈရှောငျရငျး ကလေးမီးဖှားသူမြားရှိနခွေငျးတို့ကွောငျ့ ဆေးဝါးအကူအညီလညျး အရေးပျေါလိုအပျနသေညျဟု သိရသညျ။ လကျရှိ တောငျခွေ၊ လှိုဏျဂူနှငျ့ တောထဲရှိ ခွံမြားထဲတှငျ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျကွသညျ့ စဈရှောငျနရော ၂၁ နရောမှ စုစုပေါငျး လူဦးရေ (၁၁,၀၅၈) ဦး စာရငျးကောကျခံရရှိထားပွီး အခွားကြေးရှာမြားသို့ သှားရောကျခိုလှုံနကွေသညျ့ စဈရှောငျမြားစာရငျးကို မကောကျခံနိုငျသေး ကွောငျးလညျး ခရိုငျစဈရှောငျကူညီကယျဆယျရေးကျောမတီထံမှ သိရသညျ။
ကအေဲနျယူ သထုံခရိုငျ ဘီးလငျးမွို့နယျ ဝငျးတာပနျနှငျ့ လေးကစေခနျးရှိ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီလ ၂၃ ရကျနေ့ နောကျဆုံးထားထှကျခှာပေးရနျ KNDOက စာထုတျပွနျခဲ့ပွီးနောကျ စဈကောငျစီတပျမြား ထှကျခှာခွငျးမရှိသေးသညျ့ အတှကျ နယျမွအေတှငျးပဈခတျတိုကျခိုကျမှုမြား ဖွဈပှားလာခဲ့ရာ စဈကောငျစီတပျဘကျက ကြေးရှာထဲသို့ လကျနကျကွီးပဈ ခတျမှုမြား လုပျဆောငျသောကွောငျ့ ဒသေခံအရပျသား တဈသောငျးကြျော ဘေးလှတျရာသို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျခဲ့ကွရသညျ။
ကရငျပွညျနယျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ ဝငျးရျောဒသေရှိ စဈဘေးရှောငျနကွေသညျ့ ဌာနလေူထုမြားကို စဈကောငျစီတပျက ဖမျးဆီးကွိုးတုပျပွီး ရိုကျနှကျခဲ့သဖွငျ့ ခလယျကြေးရှာအုပျစုရှိ ဒသေခံ ၁ဝ ဦးခနျ့ ဦးခေါငျးနှငျ့ ကိုယျလကျအင်ျဂါမြား ပွငျးထနျ ဒဏျရာရသှားကွောငျး သိရသညျ။ ကရငျအမြိုးသားလှတျမွောကျရေးတပျမတျော -KNLA နှငျ့ တံခှနျတိုငျရှာ ရဲစခနျးဝငျးအတှငျး ခွကေုပျနရောယူထားသညျ့ ကွာ အငျးဆိပျကွီးမွို့အခွစေိုကျ စဈကောငျစီတပျ ခလရ -၂၈၃၊ ၃၂ ပူးပေါငျးတပျရငျးတို့ကွား ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီ ၂၃ ရကျမှ မလေ ၁ ရကျနအေ့ထိ နှဈဖကျတိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ရာတှငျ စဈကောငျစီတပျမှ ကြေးရှာထဲသို့ လကျနကျကွီး မြားပဈခတျသညျ့အတှကျ လူနအေိမျနှငျ့ ရှာသားမြား ထိခိုကျသဆေုံးမှုရှိခဲ့ပွီး ဒသေခံအမြားအပွားလညျး ဖမျးဆီးရိုကျနှကျခွငျးခံခဲ့ ကွရသညျဟု ဝငျးရျောဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။
အဆိုပါ ဖမျးဆီးရိုကျနှကျခံခဲ့ကွရသညျ့ ဒသေခံရှာသားအမြားစုမှာ ဦးခေါငျးပွငျးထနျဒဏျရာရခဲ့သညျ့အတှကျ နီးစပျရာ နရော မြားတှငျ ဆေးကုသမှု ခံယူနကွေရသညျ။ ထို့အပွငျ စဈကောငျစီတပျမှ ရှာသားမြားကို အဓမ်မဖမျးဆီး၍ လူသားဒိုငျ အဖွဈအသုံးပွု ခွငျး၊ ပဈခတျရိုကျနှကျခွငျးမြားအပွငျ ကြေးရှာအတှငျး လကျနကျကွီးမြားပါ ပဈခတျမှုမြား လုပျဆောငျသညျ့အတှကျ ဥယြာဉျ ခွံနှငျ့ လူနအေိမျမြား ထိခိုကျပကျြစီးမှုရှိပွီး နအေိမျအမြားအပွားလညျး ဖောကျထှငျးခံခဲ့ကွရသညျဟု သိရသညျ။ တံခှနျတိုငျရှာ ရဲစခနျးဝငျးအတှငျး ခွကေုပျနရောယူထားသညျ့ စဈကောငျစီတပျက ၎င်းငျးတို့စခနျးရှလေ့မျးမ ဖွတျသနျးသှားလာသူမြားကို သနေတျဖွငျ့ပဈခတျခွငျး၊ နအေိမျအတှငျး စဈပုနျးရှောငျသူမြားကို ရှာဖှဖေမျးဆီးမှုပွုလုပျခွငျး၊ ရှာသားမြားကို ဖမျးဆီးချေါ ဆောငျပွီး ခဲယမျးမီးကြောကျနှငျ့ အထုပျမြား အဓမ်မထမျးစခေိုငျးခွငျးမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ။
စဈကောငျစီတပျက KNU ဝငျးရေးမွို့နယျ ထိနျးခြုပျနယျမွကေို ထိုးစဈဆငျလုပျဆောငျသညျ့အတှကျ ခလယျ၊ တံခှနျတိုငျ၊ ပူးလိနျ၊ ခလယျရှာလေး၊ မွို့ဟောငျး၊ ဘုရားငါးဆူ၊ နောငျးဒေ့၊ ခလယျမှနျစု၊ ဒိုငျလှတျ၊ ကမော့ဝမျး၊ နနျးသိုငျးထှနျ၊ တံခှနျတိုငျရှာလေးရှိ ဒသေခံဌာနလေူထု ၃, ဝဝဝ နီးပါး စဈဘေးတိမျးရှောငျနကွေရသညျဟု စဈရှောငျကူညီရေးအဖှဲ့မြားထံမှ သိရသညျ။
ကရငျပွညျနယျအတှငျး ငှလှေဲ ၊ ငှလေဲလုပျငနျးမြား၊ ဒသေတှငျး နယျစပျကုနျသှယျရေးလုပျကိုငျကွသညျ့ ကုနျသညျမြားနှငျ့ လုပျ ငနျးရှငျမြားအား စဈအာဏာရှငျတျောလှနျနသေညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ထောကျပံ့မှုရှိမရှိကို စဈကောငျစီက စဈဆေးဖမျးဆီးမှု မြား လုပျဆောငျနခွေငျးကွောငျ့ လုပျငနျးရှငျမြားမှာ အခကျတှနေ့ရေသညျ။ ပွညျနယျတှငျးရှိ လုပျငနျးရှငျမြားသညျ အမြိုးသားညီ ညှတျရေးအစိုးရ-NUG ၊ ပွညျထောငျစုလှတျတျောကိုယျစားပွု ကျောမတီ-CRPH၊ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးအဖှဲ့-PDF စသညျ့ စဈအာဏာရှငျကို ဆနျ့ကငျြတျောလှနျနကွေသော အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ဆကျသှယျကာ ထောကျပံ့မှုလုပျဆောငျခွငျးရှိမရှိနှငျ့ ပတျသကျ၍ စဈကောငျစီအဖှဲ့မြားက စဈဆေးဖမျးဆီးနခွေငျးဖွဈသညျဟု လုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ နီးစပျသူ အသိုငျးအဝိုငျးက ပွောသညျ။
စဈကောငျစီတပျနှငျ့ နယျခွားစောငျ့တပျ-BGF ပူးပေါငျးတပျမြားသညျ သာမနျအရပျသားပွညျသူမြား၊ ကုနျသညျမြား၊ ငှကွေေး လုပျငနျး လုပျဆောငျသူမြားအား ယငျးသို့ ဖမျးဆီးစဈမေးမှုမြားအပွငျ လူမှုရေး၊ ကနျြးမာရေးကိစ်စမြားဖွငျ့ မွို့ပျေါလာရောကျသညျ့ အရပျသားမြား၏ ဆိုငျကယျ၊ ကားနှငျ့ လကျကိုငျဖုနျးမြားကို စဈဆေးဖမျးဆီးရာတှငျ ငှညှေဈတောငျးခံမှုမြား ကွုံတှနေ့ကွေရ သညျ့အတှကျ ဒသေတှငျး သှားရေးလာရေးနှငျ့ ကုနျသှယျရောငျးဝယျမှုမြားမှာ ခကျခဲမှုရှိနကွေောငျး ကုနျသညျမြားက ပွောသညျ။ ယငျးသို့ ဖမျးဆီးစဈဆေးမှုမြားကွောငျ့ ကရငျပွညျနယျအတှငျးရှိ ဖားအံနှငျ့ ကော့ကရိတျမွို့နယျဘကျတှငျ ဖမျးဆီး တရားစှဲဆိုခံ ရသညျ့ ကုနျစုံဆိုငျနှငျ့ ငှလှေဲလုပျငနျးလုပျကိုငျသူ ၁၀ဦးထကျမနညျးရှိနပွေီဟု ၎င်းငျးတို့နှငျ့ နီးစပျသညျ့အသိုငျးအဝိုငျးထံမှ သိရ သညျ။
ဖားအံ၊ ကော့ကရိတျနှငျ့ မွဝတီမွို့တို့တှငျ ယခုနှဈဆနျးပိုငျးအတှငျးကလညျး လုပျငနျးရှငျမြား၏ နအေိမျနှငျ့ ဆိုငျခနျးမြားအား စဈကောငျစီ လကျအောကျခံ ပြူစောထီး၊ မဘသနှငျ့ စဈတပျထောကျခံသညျ့အဖှဲ့မြားက ၎င်းငျးတို့အား ထောကျပံ့ရနျ စာပို့ခွိမျး ခွောကျ ငှတေောငျးခွငျး၊ ဖုနျးဆကျခွိမျးခွောကျ ငှတေောငျးခံခွငျးမြား မကွာခဏ ကွုံတှခေဲ့ရကွောငျးလညျး ဖားအံမွို့ရှိ ခွိမျး ခွောကျခံရသူမြားက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ထိုအခွအေနမြေားကွောငျ့ လုပျငနျးရှငျမြား၊ ဒသေတှငျးရှိ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ အသကျအန်တရာယျကွုံတှလေ့ာရမညျကို စိုးရိမျသဖွငျ့ ပုံမှနျလုပျငနျးမြားကို မလုပျကိုငျနိုငျကွတော့ဘဲဖွဈနကွေောငျး မွပွေငျ သတငျးအရငျးအမွဈမြားအရ သိရသညျ။ https://kicnews.org/2022/05/
ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျး မတူပီမွို့တှငျ စဈကောငျစီတပျက အမြိုးသမီး ၆ ဦးအပါအဝငျ ပွညျသူ ၇ ဦးကို ဖမျးဆီးကာ စဈဗြူဟာ စခနျးသို့ ချေါဆောငျပွီး လူမဆနျစှာ ညှငျးပမျးနှိပျစကျနသေညျ CDF-Matupi က ထုတျပွနျသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီလ ၂၁ ရကျနကေ့ မတူပီမွို့အခွစေိုကျ စကစ စဈဗြူဟာစခနျးမှ တပျသား ၂ ဦး သနေတျ ၃ လကျနှငျ့ CDF-Matupi တပျဖှဲ့ထံသို့ CDM ပွုလုပျ အလငျးဝငျသညျ့ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ မတူပီမွို့ပျေါနေ အမြိုးသမီး ၆ ဦးအပါအဝငျ စုစုပေါငျးပွညျသူ ၇ ဦးကို စဈကောငျစီ တပျဖှဲ့က ဖမျးဆီးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ဖမျးဆီးခံရသော ပွညျသူ ၇ ဦးကို စဈကောငျစီတပျဖှဲ့က လူမဆနျစှာဖမျးဆီးညှငျးပနျးနှိပျစကျမှုကွောငျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးမှာ ဆေးရုံတှငျ ကုသမှုခံယူရသညျ့အဆငျ့ထိ အခွအေနဆေိုးခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ မတူပီမွို့အခွစေိုကျ စဈကောငျစီ စဈဗြူဟာစခနျး မှ တပျသား ခဈြကိုကို (တ/၃၈၇၆၈) နှငျ့ မုံရှာအခွစေိုကျ ထပရ ၉၂၉ မှ တပျသား ဖွိုးမငျး (တ/၅၂၅၇၃၇) တို့ ၂ ဦးသညျ သနေတျအမြိုးအစား BA-72,MA-2,MA-3 စုစုပေါငျး (၃) လကျနှငျ့အတူ CDF- Matupi ထံသို့ CDM ပွုလုပျအလငျးဝငျခဲ့ကွ ခွငျးဖွဈသညျ။
စဈကောငျစီတပျဖှဲ့သညျ ၎င်းငျးတို့၏ လကျနကျ ၃ လကျပွနျလညျရရှိရေးအတှကျ ပွညျသူမြားကိုဓားစာခံအဖွဈအသုံးခြ ဖမျဆီး ခွငျး၊ နှိပျစကျခွငျးနှငျ့ အသကျအန်တရာယျခွိမျးခွောကျမှုအပျေါ ကနျ့ကှကျရှုတျခပြွီး CDF-Matupi အနဖွေငျ့ စကစ အပါအဝငျ မညျသညျ့အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးနှငျ့မဆို အပေးအယူကိစ်စ လုံးဝ (လုံးဝ) မပွုလုပျကွောငျး CDF-Matupi က ထုတျပွနျသညျ။
ခငျြးပွညျနယျ မတူပီမွို့ကနေ မငျးတပျမွို့ကိုပွနျဆငျးလာတဲ့ စဈကားအစီး ၇၀ ကြျောပါတဲ့ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့နဲ့ CDF-Mindat တပျဖှဲ့တို့ဟာ ဧပွီလ ၃၀ ရကျနကေ့စလို့ မငျးတပျ-မတူပီကားလမျးတဈလြှောကျမှာ တိုကျပှဲဆကျတိုကျဖွဈပှားနပွေီး စဈကောငျ စီဘကျက အနညျးဆုံး ၉ ယောကျသဆေုံးခဲ့ပွီး သဆေုံးမှုဟာ အဲဒီထကျလညျး မြားနိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ။ စဈကောငျစီ ယာဉျတနျးဟာ မတူပီမွို့ကနေ ဧပွီလ ၂၈ ရကျနကေ့စတငျထှကျခှါလာခဲ့ရာမှာ မငျးတပျနယျမွေ အတှငျး စတငျဝငျရောကျလာတဲ့ ဧပွီလ ၃၀ ရကျနကေ့စလို့ CDF-Mindat တပျဖှဲ့က အနီးကပျပွောကျကြားတိုကျ ခိုကျမှုအပါအဝငျ မိုငျးဆှဲတိုကျခိုကျခဲ့ကွတာလို့ CDF-Mindat ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူဆလိုငျးဟားအှမျကပွောပါတယျ။
ဧပွီလ ၃၀ ရကျနေ့ မငျးတပျ-မတူပီကွား မိုငျတိုငျ ၇၁ မှာဖွဈပှားတဲ့ တိုကျပှဲမှာ CDF-Mindat တပျဖှဲ့ရဲ့အနီး ကပျပွောကျကြား တိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ စဈကောငျစီတပျသား ၄ ဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး မေ ၁ ရကျနေ့ မငျးတပျ-မတူပီကွား မိုငျတိုငျ ၆၈ မှာဖွဈပှားတဲ့ တိုကျပှဲအတှငျးမှာတော့ စဈကောငျစီဘကျက အကဆြုံးစာရငျးမသိရဘူးလို့သူကဆိုပါတယျ။ မလေ ၂ ရကျနမှေ့ာဖွဈပှားတဲ့ တိုကျပှဲမှာတော့ စဈကောငျစီဘကျက ၅ ဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး CDF-Mindat တပျဖှဲ့က မိုငျးဆှဲတိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ စဈကောငျစီဘကျ အကဆြုံးအမြားအပွားရှိနိုငျပမေယျ့ အတညျပွုလို့မရဘူးလို့ ဆလိုငျးဟားအှမျကဆကျပွောပါတယျ။
စဈကောငျစီယာဉျတနျးဟာ မတူပီမွို့ကနေ စတငျထှကျခှါလာတဲ့အခြိနျမှာလညျး မငျးတပျ-မတူပီကွား မိုငျတိုငျ ၉၀ နဲ့ ၉၁ လောကျမှာ CDF-Matupi တပျဖှဲ့က ကွားဖွတျတိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ စဈကောငျစီတပျသား ၈ ဦး သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ ၁၀၂ မိုငျသာ ကှာဝေးပွီး ပုံမှနျအားဖွငျ့တဈရကျခရီးသာသှားရတဲ့ မငျးတပျ-မတူပီကွားမှာ စဈကောငျစီယာဉျတနျးမှာ ခငျြးဒသေကာကှယျရေး တပျဖှဲ့တှရေဲ့ တိုကျခိုကျမှုတှကွေောငျ့ အသှားတုနျးကလညျး ၁၀ ရကျကြျောကွာ ခရီးနှငျခဲ့ကွပွီး တိုကျပှဲအတှငျးမှာလညျး အကြ အဆုံးမြားလရှေိ့ပါတယျ။ https://khonumthung.org/
စဈကောငျစီယာဉျတနျးစဈကွောငျးသညျ မလေ ၂ ရကျနကေ့ ဟားခါးမွို့မှ ဖလမျးမွို့ဘကျသို့ ထှကျခှာလာကာ ယမနျနေ့ ညနေ ပိုငျးက CDF- Hakha တပျဖှဲ့နှငျ့ တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ပွီးနောကျ စဈကောငျစီ တပျမှ ဖလမျး-ဟားခါး လမျးမပျေါရှိ လူနအေိမျမြားကို မီးရှို့ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ခငျြးကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ CDF- Hakha သညျ ယမနျနကေ့ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ကို ခြှနျကြုံးကြေးရှာနှငျ့ ဒုတျထဈကြေးရှာကွား တှငျ ကွားဖွတျတိုကျခိုကျကာ စဈကောငျစီတပျသား ၁၃ ဦး သဆေုံးခဲ့သညျဟု CDF- Hakha တပျဖှဲ့ထံမှသိရသညျ။ ဟားခါး မွို့မှထှကျလာသညျ့ စဈကောငျစီယာဉျတနျးတှငျ စဈကောငျစီတပျအငျအား ၁၀၀ ကြျောနှငျ့ သံခပျြကား ၂ စီး၊ စဈကားအစီး ၂၀ ကြျောပါဝငျသညျဟုသိရသညျ။ https://khonumthung.org/
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ ကလေးမွို့နယျတောငျပိုငျး၊ ရှားဖိုကြေးရှာအနီးတှငျ မလေ ၂ ရကျနှငျ့ ၃ ရကျနအေ့ထိဖွဈပှားသော ၂ ရကျတာတိုကျပှဲတှငျ စဈကောငျစီတပျသား အနညျးဆုံး ၂၀ ဦးသဆေုံးခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့သညျ မလေ ၂ ရကျနနေံ့နကျပိုငျးကစ၍ ရှားဖိုကြေးရှာဘကို အပွငျးအထနျထိုးစဈဆငျလာခဲ့ရာ PDF (Kalay), CDF(KKG), RKDF, ပ.က.ဖ နှငျ့ Zomi PDF ပူးပေါငျးတပျဖှဲ့နှငျ့ မလေ ၃ ရကျ ညနပေိုငျးအထိ တိုကျပှဲပွငျးပွငျး ထနျထနျဖွဈပှားခဲ့ကွသညျ။
မလေ ၃ ရကျနကေ့ဖွဈပှားသညျ့ တိုကျပှဲတှငျ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့က တိုကျခိုကျရေးရဟတျယာဉျ ၂ စီးဖွငျ့ ရှားဖိုရှာသို့ ၂ ကွိမျလာ ရောကျပဈခတျခဲ့သညျဟုသိရသညျ။ အဆိုပါရှားဖိုကြေးရှာတိုကျပှဲ နှဈရကျတာတှငျ ပူးပေါငျးတပျဖှဲ့ဘကျမှ CDF-KKG တပျဖှဲ့ဝငျ ၁ ဦး လကျနကျကွီး အပိုငျးအစ ထိမှနျဒဏျရာရှိခဲ့သျောလညျး စိုးရိမျစရာမရှိဟု သိရသညျ။ ယငျးတိုကျပှဲတှငျ ပါငျးပူးတပျဖှဲ့မှ M1 မောငျးပွနျသနေတျ ၂ လကျ၊ MA2 စကျကလေး ၂ လကျ၊ MA ကညျြအိမျ ၁ဝခု၊ ၅.၅၆ ကညျြ ၁၅၀ တောငျ့၊ နငျးမိုငျး ၁လုံး၊ လကျပဈဗုံး ၁လုံး နှငျ့ ဖုနျး၂ လုံး သိမျးဆညျးရမိပွီး စဈကောငျစီတပျဖကျမှ လှတျတငျထားသညျ့ ဗုံး ၃လုံး ပါဝငျသညျ့ တိုကျခိုကျရေး ဒရုနျး ၁စငျး ပဈခြ နိုငျခဲ့သညျဟု သိရသညျ။
စဈကောငျစီတပျဖှဲ့မှ လကျနကျကွီးပဈခတျသောကွောငျ့ ရှားဖိုကြေးရှာမှ အရပျသားပွညျသူ အမြိုးသား ၂ ဦးသဆေုံးပွီး အမြိုး သမီး ၁ ဦး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့သညျ။ ရှားဖိုကြေးရှာသညျ အိမျခွေ ၅၀၀ ဝနျးကငျြရှိပွီး လူနအေိမျမြားကို စဈကောငျစီတပျဖှဲ့က မီးရှို့ဖကျြဆီးခဲ့သညျဟု သိရသညျ။ အလားတူ မလေ ၁ ရကျနကေ့လညျး ကလေးမွို့နယျတောငျပိုငျး အရှစေ့ညျးကြေးရှာက ဘုနျးကွီးကြောငျးနှငျ့ စာသငျကြောငျးကလှဲ၍ နအေိမျမြားအားလုံးနီးပါးကို စဈကောငျစီတပျဖှဲ့က ရှာလုံးကြှတျမီးရှို့ဖကျြဆီးခဲ့ ကွောငျးသိရသညျ။ https://khonumthung.org/
ယမနျနကေ့ ကငျြးပပွီးစီးခဲ့သညျ့ မှနျအမြိုးသားရေးရာညီလာခံ (၂၀၂၂) တှငျ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုနှငျ့ မှနျပွညျနယျဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံမူစစေ့ပျညှိနှိုငျးရေးဆှဲရေး ဖှဲ့စညျးတာဝနျပေးအပျခဲ့ကွောငျး မလေ ၅ ရကျနကေ့ မှနျဘာသာဖွငျ့ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ သို့ရာတှငျ အဆိုပါအခွခေံမူစစေ့ပျညှိနှိုငျးရေးဆှဲရေးကျောမတီတှငျ မညျသညျ့ပုဂ်ဂိုလျမြား ဦးဆောငျပါဝငျနေ သညျကို အသေးစိတျဖျောပွထားခွငျး မရှိပေ။
ထို့အတူ မှနျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ (ဂကောံပံငျကောံဂကူမနျ) ဖှဲ့စညျးပုံကို ယာယီအားဖွငျ့အတညျပွုခဲ့ကွပွီး အဆိုပါ ဖှဲ့စညျးပုံကို လကျရှိပစ်စုပ်ပနျကာလနှငျ့ကိုကျညီစရေနျ ပွနျလညျသုံးသပျ၍ မှနျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျရေး အကောငျအထညျ ဖျောဆောငျညှိနှိုငျးရေး(အဖှဲ့စုံ)အား ဖှဲ့စညျးတာဝနျပေးအပျခဲ့ကွောငျး ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ လကျရှိ ယနနေို့ငျငံ ရေးအခြိုးအကှတှေ့ငျ တညျတနျ့ခိုငျမွဲ၍ ညီညှတျသော အမြိုးသားအငျအားစုတရပျဖွဈပျေါလာရေးသညျသာ အရေးကွီးသညျ့ လိုအပျခကျြတရပျဟု မှနျအမြိုးသားရေးရာညီလာခံကရှုမွငျပွီး မှနျတမြိုးသားလုံးညီညှတျရေးကို ခိုငျမာစှာတညျဆောကျသှား မညျဖွဈကွောငျး အလေးအနကျထား၍ အသိပေးတိုကျတှနျးအပျပါသညျဟု ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
မှနျအမြိုးသားရေးရာညီလာခံ (၂၀၂၂) ကို မှနျပွညျသဈပါတီ ထိနျးခြုပျနယျမွေ ရေးမွို့အရှဘေ့ကျ ရေးခြောငျးဖြားဒသေရှိ မှနျ အမြိုးသားပညာရေးဌာန(ဗဟို) ညီစားစခနျး၌ ၄ ရကျကွာကငျြးပခဲ့ရာ မလေ ၅ ရကျနတှေ့ငျ အောငျမွငျစှာပွီးစီးခဲ့ကွောငျး၊ ရဟနျးသံဃာတျော၊ မှနျပွညျသဈပါတီ NMSP, မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP, အရပျဖကျ မှနျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားမှ ကိုယျစားလှယျ မြား၊ ဖိတျကွားသငျ့ ဖိတျကွားထိုကျသညျ့ အဖှဲ့အစညျး/ပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ လလေ့ာသူမြားအပါအဝငျ ၂၅၉ ဦး တကျရောကျခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ https://burmese.monnews.org/
ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျထှနျးမွတျနိုငျက အနောကျပိုငျးတိုငျး တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျထငျလတျဦးကို ယနေ့ သူ၏ Twitter တှဈတာလူမှုကှနျယကျ စာမကျြနာမှတဆငျ့ မာမာထနျထနျ သတိပေးမှုတဈခုကို ပွုလုပျခဲ့သညျ။
“ကိုထငျလတျဦးသိပျလြှောကျမလုပျနဲ့အာရုံနောကျနပွေီ၊ ငွိမျးခမျြးရေးဘာညာ သောကျဂရုစိုကျနမှော မဟုတျဘူး။ မငျးနတေဲ့နေ ရာထိ တကျကွိတျပလိုကျမှာနျော” ဟု ဗိုလျခြုပျထှနျးမွတျနိုငျက လူမှုကှနျရကျ Twitter တှငျ ရေးသားခဲ့သညျ။
အဆိုပါ ရေးသားမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး နောကျဆကျတှဲ ဘာတှဖွေဈလာနိုငျပါသလဲဟု မွပေုံမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစား လှယျဟောငျး ရခိုငျဝါရငျ့နိုငျငံရေးသမား ဦးဖသေနျးကို မေးမွနျးရာသူကယခုလို ပွောကွားသညျ။ “ အဲဒါတော့ အခွအေနေ မှနျးဆလို့မရဘူးဗြာ။ ဒါပမေဲ့ အခွအေနတှေကေ ထပျပွီးတော့ ဖွဈလာရငျတော့ သူပွောသလို ဖွဈသှားနိုငျတာပေါ့နျော” ဟု ပွော ဆိုသညျ။ https://burmese.narinjara.com/news/detail/6274b84b8dfa1f53681b20f0
ရခိုငျပွညျနယျ၊ စဈတှမွေို့နယျမှ ဖမျးဆီးခံရသညျ့ မူဆလငျကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးတဈဦးနှငျ့ ရခိုငျလူမြိုး ကြေးရှာအုပျခြုပျ ရေးမှူးတဈဦးကို စဈတှမွေို့မရဲစခနျးတှငျ အမှုဖှငျ့ရနျစီစဥျနသေညျဟု သိရသညျ။ ၎င်းငျးတို့ နှဈဦးမှာ စဈတှမွေို့တှငျ မလေ ၄ ရကျနကေ့အဖမျးခံရသော ဘောဒူဖကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးရျောဖီးလျနှငျ့ ကွကျကိုငျးတနျ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးထှနျးလှစိနျတို့ဖွဈကွသညျ။
သူတို့နှဈဦးကို စဈတှအေမှတျ(၁) ရဲစခနျးတှငျအမှုဖှငျ့ရနျ စီစဥျနသေညျဟု မနကေ့ ဖမျးဆီးခံရရာမှလှတျလာသူ အမညျမဖျောလို သညျ့ မူဆလငျတဈဦးက နိရဉ်စရာသတငျးဌာကိုပွောသညျ။ ထိုသို့အမှုဖှငျ့မညျကို စဈတှမွေို့မရဲစခနျး အမှတျ ၁ စခနျး တာဝနျရှိသူ တဈဦးကို နိရဉ်စရာသတငျးဌာနမှ သှားရောကျမေးမွနျးရာ အမှုဖှငျ့ရနျ စီစဉျနသေညျဟု အတညျပွုပွောဆိုသညျ။
မနကေ့လညျး AA ကို အမဲသားမြား သှားရောကျ ရောငျးခသြညျဟုဆိုကာ မလေ ၃ ရကျနကေ့ ဖမျးဆီးသှားသညျ့ မူဆလငျရှာသား ၅ ဦးကို ခံဝနျဖွငျ့ စဈတပျမှ မနကေ့ ပွနျလှတျပေးခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးတို့မှာ မကညျြးမွိုငျရပျကှကျ အကှကျ ၉ မှ ဦးနာဂူ(ခ) ဦးမောငျဘ၊ သက်ကယျပွငျ ကြေးရှာမှ ဦးအီးစူး(ခ)ဦးလှမွငျ့နှငျ့ ဦးကြျောနု၊ ဘောဒူဖကြေးရှာမှ ဦးနူရျဟူးဆောငျး (၆၉)နှဈ၊ ဒါးပိုငျကြေးရှာမှ ဦးဆျောလိမျး(ခ) စောနီတို့ဖွဈကွသညျ။ https://burmese.narinjara.com/news/detail/6274afa88dfa1f53681b20ee
ကခငျြလှတျမွောကျရေးအဖှဲ့ ( KIO) မှ စဈကောငျစီမှ ဖိတျကွားထားသော ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးပှဲကို မတကျဟု ယနထေု့တျပွနျ ကွညောခကျြ ထှကျလာပွီးနောကျ အအေအေပါအဝငျ မွောကျပိုငျးညီနောငျ မဟာမိတျသုံးဖှဲ့အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးဆှေးနှေးပှဲကို တကျ/မတကျအပျေါ လူအမြားအာရုံစိုကျစရာဖွဈလာနသေညျဟု ကြောကျတျောမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးထှနျးဝငျးက ပွောကွားသညျ။
လကျရှိတှငျ ညီနောငျမဟာမိတျ သုံးဖှဲ့ဖွဈသညျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) ၊ တအာငျး ( TNLA) နှငျ့ ကိုးကနျ့ (MNDAA) အဖှဲ့ ဆှေးနှေးတကျ/မတကျကို အမြားကစိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့နကွေပွီး လကျရှိ စဈကောငျစီဥက်ကဋ်ဌက ဖိတျကွားထားသညျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးပှဲအောငျမွငျရေးမှာ အငျအားကွီး တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့မြား တကျ/ မတကျ အပျေါတှငျ မူတညျနသေညျဟု သုံးသပျမှုမြားလညျးရှိနသေညျ။.
မွနျမာနိုငျငံထဲမှာ အငျအားကွီးသညျ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖွဈသညျ့ ကခငျြလှတျမွောကျရေးအဖှဲ့ (KIO) သညျ ထုတျပွနျ ကွညောခကျြ (၂/၂၀၂၂) ကို ယနေ့ မလေ ၅ ရကျ နစှေဲ့ဖွငျ့ ထုတျပွနျရာတှငျ စဈကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဖိတျကွားသညျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးပှဲသို့ တကျရောကျဆှေးနှေးမညျ မဟုတျဟု ဖျောပွထားသညျ။
စဈရေးအသံမြားမကွားရဘဲ တညျငွိမျနသေညျ့ ရခိုငျပွညျနယျ၊ မွောကျဦးမွို့နယျ ပနျးစြေးမွောငျးဘကျတှငျ ယမနျနညေ့က သနေတျသံ ၁ဝ ခကျြခနျ့ ထှကျပျေါခဲ့၍ ဒသေခံမြားအကွား စိုးရိမျခဲ့ရသညျဟု သိရသညျ။ အဆိုပါသနေတျသံမြားသညျ ယမနျနေ့ မလေ ၄ ရကျ ည ၉ နာရီခနျ့က ထှကျပျေါခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ပနျးစြေးမွောငျးဘကျတှငျ ငါးရှာ၊ ဖားရှာထှကျသူမြားကို ပနျးစြေးမွောငျး တဈဘကျကမျးရှိ ငှခေေါငျးပေါကျ(ချေါ) ငှတေောငျပေါကျတောငျ၌ စခနျးခထြားသညျ့ အမှတျ (၃၁)ရဲတပျရငျး၏ ကငျးစခနျးက လှမျးပဈခတျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။
သနေတျသံမြားထှကျပျေါခဲ့သညျ့ ပနျးစြေးမွောငျးသညျ မွောကျဦးမွို့နှငျ့ တဈမိုငျခနျ့သာ ကှာဝေးပွီး ယငျးနရောတှငျ လူနေ အိမျမြားထကျ မြားသောအားဖွငျ့ လယျယာလုပျငနျးနှငျ့ စိုကျခငျးလုပျငနျးမြားကို လုပျကိုငျသူမြားသာ နထေိုငျကွကွောငျး သိရ သညျ။ လကျရှိရခိုငျပွညျနယျတှငျ စဈရေးအရတညျငွိမျနသေညျ့အခြိနျ၌ ယခုကဲ့သို့သနေတျသံမြားထှကျပျေါခဲ့သညျ့အပျေါတှငျ စိုးရိမျမှုရှိကွောငျး ပနျးစြေးမွောငျး ဒသေခံတဈဦးက နိရဉ်စရာသို့ပွောသညျ။
ယခုဖွဈစဉျကွောငျ့ လူတဈစုံတဈရာထိခိုကျပြောကျဆုံးမှုမရှိခဲ့သျောလညျး ဒသေခံမြားအကွား စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှုမြား ဖွဈခဲ့သညျ ဟု ဒသေခံမြားက ဆိုသညျ။ ယခုကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မှ လုံခွုံရေးနှငျ့နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးကြျောသူရနှငျ့ ပွညျနယျအစိုးရ ပွောခှငျ့ရသူ ဦးလှသိနျးတို့အား ဆကျသှယျခဲ့သျောလညျး ဆကျသှယျမရခဲ့ပါ။ မွောကျဦးမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးစိုးစိုးသကျကို ထပျမံဆကျသှယျခဲ့သျောလညျး မအားလပျသေးဟု ပွောသညျ။
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ ပနျလငျကြေးရှာအတှငျးတှငျ နထေိုငျသညျ့ ကလေးငယျနှဈဦးသညျ မွမွေုပျမိုငျးနငျးမိ ပွီး ဆေးကုသရနျအတှကျ အခကျအခဲရှိနကွေောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ မလေ ၅ ရကျ မှနျးလှဲပိုငျးအခြိနျတှငျ ကြေးရှာ နှငျ့ တဈမိုငျခနျ့ကှာဝေးသညျ့ ယာတောဘကျ မွငျးသှားရှာသညျ့ ပနျလငျကြေးရှာမှ ကလေးငယျနှဈဦးသညျ မွမွေုပျမိုငျးနငျးမိပွီး ပွငျးထနျစှာ ဒဏျရာရရှိသှား ကွောငျး သတငျးသိရသညျ။
အဆိုပါ မွမွေုပျမိုငျးနငျးမိသညျ့ ကလေးငယျနှဈဦးကို အိုမျတမာဝျ လူမှုကူညီရေးအသငျးမှ သှားရောကျ သယျဆောငျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ကြောကျမဲမွို့နယျမှ တဈဆငျ့ လားရှိုးမွို့ ပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျခဲ့ရကွောငျး သတငျးသိရသညျ။ ဒဏျရာရ ကလေးငယျနှဈဦး သညျ ကြေးလကျနပွေညျသူမြားဖွဈသညျ့အပွငျ လကျလုပျလကျစားမိသားစုဝငျမြားလညျးဖွဈသညျ့အတှကျ ဆေးကုသမှု ခံယူ ရနျလညျး အခကျအခဲမြားရှိနကွေောငျး အိုမျတမာဝျ လူမှုကူညီရေး အသငျးမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကိုပွော သညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈနှောငျးပိုငျးမှစတငျကာ ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျးနှငျ့ သီပေါမွို့နယျအတှငျးတှငျ တိုငျးရငျးသား လကျနကျ ကိုငျတပျဖှဲ့တို့အကွား တိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး မွမွေုပျမှိုငျးမြားကွောငျ့ဒဏျရာရရှိသူ (၁၁) ဦးရှိခဲ့ပွီး ၃ ဦး သဆေုံးခဲ့ ကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/28003
ထိုငျးနိုငျငံ ခငျြးမိုငျမွို့မှ မွနျမာကောငျစဈဝနျခြုပျရုံး သံဝနျထမျးအမြိုးသမီး ဒျေါမွသိင်ျဂီသညျ CDM လှုပျရှားမှုမှာ ပူးပေါငျး ပါဝငျလာကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ ဒျေါမွသိင်ျဂီသညျ မေ (၃)ရကျမှစတငျပွီး CDM တှငျ ပူးပေါငျးပါဝငျကွောငျး ၎င်းငျး၏ လူမှု ကှနျရကျစာမကျြနှာတှငျ အသိပေး ကွညောထားလိုကျသညျ။
အဆိုပါ တရားမဝငျ စဈအုပျစုကို ကိုယျစားပွုရနျ ဆန်ဒမရှိခွငျး၊ ဒီမိုကရစေီ ပွနျလညျရရှိရနျအတှကျ ကွိုးပမျးလကျြရှိသညျ့ မွနျမာ နိုငျငံ ပွညျသူမြားအပျေါ ဖမျးဆီးသတျဖွတျ နှိမျနငျးမှုမြားကို လုံးဝလကျခံနိုငျခွငျးမရှိသညျ့အတှကျ CDM လုပျဖျောကိုငျဘကျ ဝနျထမျးမြားနှငျ့အတူ ပွညျသူ့ဘကျမှရပျတညျပွီး Civil Disobedient Movement (CDM) တှငျ ပါဝငျသှားမညျ ဖွဈကွောငျးလညျး သူမက ရေးသားထားသညျ။
ပွညျသူ့ဝနျထမျးတဈဦးဖွဈသညျ့အတှကျ ပွညျသူဓမ်မဘကျမှသာ အခိုငျအမာရပျတညျသှားမညျဖွဈပွီး တရားမြှတမှု၊ ဖွောငျ့မတျ မှနျကနျမှုနှငျ့ အမှနျတရားတို့ကို အလိုရှိကွောငျး ဒျေါမွသိင်ျဂီက ဆိုသညျ။ ရှေးကောကျခံ အရပျသားအစိုးရ ကိုဖွုတျခပြွီး အာဏာ သိမျးလိုကျသညျ့ စဈတပျ၏ လုပျရပျကို လကျမခံနိုငျသညျ့အတှကျ CDM လှုပျရှားမှုကို အာဏာသိမျးပွီး ရကျပိုငျးအကွာတှငျ ဌာန အသီးသီးက ဝနျထမျးတှဟော ဆောငျရှကျခဲ့ကွသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/27996
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျခရိုငျ ပနျဆိုငျးမွို့နယျခှဲ မုံးပျေါ မိုငျဖနျကြေးရှာဘကျတှငျ စဈကောငျစီနှငျ့ ကိုးကနျ့တပျမတျော (MNDAA) တို့ တိုကျပှဲပွငျးထနျမှု ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။
ယမနျနေ့ မေ (၄) ရကျနေ့ ညသနျးခေါငျအခြိနျတှငျ စဈကောငျစီ တပျစခနျးရှိရာနရောကို ကိုးကနျ့တပျမတျော MNDAA တို့က လကျနကျကွီးဖွငျ့ လာရောကျပဈခတျခဲ့ပွီးနောကျ တိုကျပှဲအပွငျးထနျဖွဈခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ယမနျနကေ့ MNDAA နှငျ့ စဈကောငျစီ တို့သညျ မိနဈ (၂၀) ခနျ့အကွာ တိုကျပှဲအပွငျးအထနျ ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဧပွီလကုနျပိုငျးတှငျလညျး ကိုးကနျ့တပျမတျော MNDAA နှငျ့ စဈကောငျစီတို့ တိုကျပှဲ ပွငျးထနျမှုကွောငျ့ စီစီဝမျတာပနျ တောငျ ခွေ၊ ဟူပနျ့ရှာအနီးတှငျ လကျနကျကွီးကရြောကျမှုကွောငျ့ နအေိမျတဈခြို့ ပကျြစီးခဲ့ရသညျ့အပွငျ ကွံဧက (၁၀၀) နီးပါး လောငျ ကြှမျးပကျြစီးခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/27990
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့တှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ တိုကျပှဲကွောငျ့ TYN (Tai Youths Network) မှ အလုပျအမှုဆောငျ အဖှဲ့ဝငျတဈဦးအပါအဝငျ အရပျသား သြှမျးလူငယျနှဈဦး ကညျြထိမှနျ သဆေုံးခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ စကစ ပျေါတာဆှဲခံ ရပွီး ကညျြထိသဆေုံးသှားသညျ့ သြှမျးလူငယျ ၂ဦး ရုပျအလောငျး မလေ ၄ ရကျ ညနေ ၅ နာရီဝနျးကငျြတှငျ မူဆယျမွို့နယျ မျောတောငျးကြေးရှာအနီးတှငျ TNLA တပျဖှဲ့ နှငျ့ စဈကောငျစီတို့ တိုကျပှဲဖွဈပှားပွီး စဈကောငျစီဘကျမှ တပျဖှဲ့ဝငျ ၁၂ ယောကျ ကဆြုံးခဲ့ရသညျ့အပွငျ ပျေါတာဆှဲခံရသညျ့ သြှမျးလူငယျနှဈဦးလညျး အသကျဆုံးရှုံးလိုကျရကွောငျး သိရသညျ။
စဈကောငျစီတို့၏ ပျေါတာဆှဲခွငျးခံရပွီး TNLA တို့ ပဈလိုကျသညျ့ လကျနကျကွီးကွောငျ့ ထိမှနျသဆေုံးသှားရသညျ့ TYN အလုပျအမှုဆောငျနှငျ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူတို့၏ ရုပျအလောငျးကို မူဆယျမွို့မှ ပရဟိတ လူမှုကူညီရေးအသငျးမြားက သှားရောကျ သယျဆောငျခဲ့ရကွောငျး သိရသညျ။ ထို တိုကျပှဲဖွဈစဥျမြားနှငျ့ ပကျသကျပွီး ဒသေခံမြားကို ဆကျသှယျမေးမွနျးရာ TNLA တပျဖှဲ့တို့သညျ မျောတောငျးကြေးရှာအနီးရှိ တောငျကုနျးတဈခုပျေါတှငျ နရောယူထားခွငျးဖွဈပွီး စဈကောငျစီတပျသား ပျေါ တာဆှဲလာသညျ့ အရပျသားပွညျသူကားကို ပဈခတျခွငျး ဖွဈကွောငျး မျောတောငျးကြေးရှာ ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။
ထို့အပွငျ တိုကျပှဲအတှငျး ကဆြုံးခဲ့သညျ့ TYN မှ အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့ဝငျသညျ သြှမျးပွညျညီညှတျရေး ကျောမတီ (CSSU) မှ အဖှဲ့ဝငျ တဈဦးဖွဈပွီး၊ ရပျရှာအရေး၊ စဈဘေးရှောငျအရေးကို ကူညီလုပျဆောငျနသေညျ့ လူငယျဖွဈသညျ။ တအာငျးအမြိုးသား လှတျမွောကျရေးတပျမတျော (TNLA) တို့မှ စဈကောငျစီ မှ ပျေါတာဆှဲပွီး အရပျသားတငျဆောငျလာသညျ့ ကားယာဥျမြားပါမခနျြ တိုကျခိုကျပဈခတျမှုနှငျ့ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့တို့၏ အကွမျးဖကျလုပျရပျမြားဖွဈသညျ့ လမျးသှားလမျးလာပွညျသူ့ ယာဥျမြားကို ပျေါတာဆှဲမှုကွောငျ့ အပွဈမဲ့ သြှမျးလူငယျ နှဈဦး အသကျဆုံးရှုံးလိုကျရသညျ။
သြှမျးပွညျအရှပေို့ငျး တာခြီလိတျမွို့ ရှတေိဂုံဘုရားလမျးရှိ ပွညျခိုငျဖွိုးရုံး ယနေ့ (မလေ ၅ ) ရကျ မနကျ ၂ နာရီဝနျးကငျြတှငျ သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျခံခဲ့ရကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။
အဆိုပါ ပွညျခိုငျဖွိုးရုံးတှငျ ရုံးတကျသူမြားမရှိကွောငျး သနျ့ရှငျးရေးသမားနှငျ့ ညစောငျ့ ဝနျထမျးသာရှိကွောငျး သိရသညျ။ တာခြီ လိတျမွို့သညျ မကွာခဏ ဗုံးပေါကျကှဲသံမြား၊ သနေတျပဈခတျသံမြား ကွားနရေသဖွငျ့ ညပိုငျးခြိနျတှငျ အပွငျထှကျသှားလာ မှုကို စိုးရိမျနရေကွောငျး သိရသညျ။
တာခြီလိတျမွို့သညျ နိုငျငံရေး နှငျ့ ပတျသတျပွီး ပဈခတျမှုသညျ ယနမေ့နကျက ပထမဆုံးအကွိမျ ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့တှငျ နထေိုငျသညျ့ PDF တပျသား၏မိသားစုဝငျ အမြိုးသမီးတဈဦးကို စဈကောငျစီက ဓားစာခံ အဖွဈ လာရောကျဖမျးဆီးသှားကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။
မူဆယျမွို့ ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ PDF တပျဖှဲ့ဝငျတဈဦး၏ အမဖွဈသူကို စရဖက ယမနျနေ့ မလေ ၂ ရကျနေ့ ညနပေိုငျး ၄ နာရီဝနျးကငျြတှငျ စဈကောငျစီ လကျအောကျခံ စရဖက ၎င်းငျး၏နအေိမျသို့ ရှဝေယျရနျဟနျဆောငျပွီး လာရောကျဖမျးဆီးသှား ကွောငျးသိရသညျ။ ထိုအမြိုးသမီးကို လကျရှိမှာ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ဖမျးဆီးသှားပွီး စရဖ စဈကွောရေး စခနျးတှငျတညျရှိနကွေောငျး PDF တပျဖှဲ့ဝငျက ထပျလောငျးပွောပွသညျ။
စဈကောငျစီက PDF တပျဖှဲ့ဝငျ မိသားစုမြားကို ဓားစားခံအဖွဈထပျမံဖမျးဆီးလာပါက စဈကောငျစီ၏ ပိုငျဆိုငျမှုမြား၊ စဈကောငျစီ လကျအောကျခံ ဝနျထမျးမြား၊ ရဲမြား၏ မိသားစုဝငျမြားကို ပွနျလညျတိုကျခိုကျသှားနိုငျကွောငျး သြှမျးမွောကျ PDF တပျဖှဲ့ဝငျ တဈဦးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကိုပွောသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/27964
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး နမျ့ခမျးမွို့နယျ ငှနျအငျကြေးရှာတှငျ အမညျမသိလကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့တဈဖှဲ့က စဈဆေးရေးဂိတျတှငျ စောငျ့နသေညျ့ စဈကောငျစီ လကျအောကျခံ ဝနျထမျး (၃) ဦး ကို လာရောကျပဈခတျပွီး သဆေုံးသှားကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ ယမနျနေ့ မလေ (၃) ရကျ ငှနျအငျကြေးရှာ အနီးတှငျ ည (၈) နာရီကြျောတှငျ သဈတောဝနျထမျးမြား၊ မူးယဈဆိုငျရာရဲဝနျထမျးမြား ရှိနစေဉျ လာရောကျပဈခတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဝမျငှနျအငျကြေးရှာသညျ နမျ့ခမျး – မိုငျးဝီး ကားလမျးမကွီးပျေါ ရှိသညျ့ ကြေးရှာတဈရှာဖွဈပွီး သဈတောမြား၊ မူးယဈမြား မကွာခဏ ကားမြား၊ ထျောလဂြီမြားကို လာရောကျစဈဆေးပွီး အခှနျမြား ကောကျလကျြရှိကွောငျး နမျ့ခမျးဒသေခံတဈဦးက ပွောသညျ။
နမျ့ခမျးမွို့နယျသညျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအမြားအပွားလှုပျရှားရာ နယျမွဖွေဈပွီး မကွာခဏပဈခတျမှုမြားလညျး ရှိ သညျ့ နရောဒသေဖွဈသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/27969